အပြိုရှုံးသော... - Owl Myanmar News
…တိုကျခနျး တံခါးဝကိုရောကျတော့ ဖှငျ့လြှကျမို့ ကွညျ့လိုကျသညျ။ မိနျးမ ဖိနပျတဈရံ တှတေ့ာနဲ့ ဧညျ့သညျရောကျနတေယျဆိုတာ ခနျ့မှနျးမိတယျ။ ဝငျလိုကျတော့ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ဘယျသူမှလဲ မတှရေ့ နောကျ ကိုသိနျးအောငျ အခနျးက အသံကွားနရေသညျ။ အကယျြကွီးမဟုတျပမေဲ့ ပုံမှနျထကျတော့ပိုသညျ။ သုံးထပျသားအခနျးဖှဲ့မို့ ကွားလိုကျရသသညျ။ “ နငျဘယျလိုဖွဈနတောလဲ ဒါတော့ပေးလို့မဖွဈဘူး။ ငါအရငျး ပွနျထညျ့ရမှာပါ သိနျးအောငျရယျ ငါတဈကယျ ဒုက်ခရောကျနပွေီ ငါသဘကျခါ မပေးနိုငျရငျ တရားစှဲတော့မှာ လုပျပါဟယျ နငျငါ့ကို ဆယျသိနျးပဲခြေးရမှာ နငျ့ဆီမှာ အစိတျတောငျ ကနျြနသေေးတာကို… ” ဒါဟိုဘကျလမျးက မအေးမိအသံပဲ ဘာတှဖွေဈနကွေလဲတောမသိ အသံမပေးတော့ပဲ ဆကျနားထောငျလိုကျမိသညျ။ “ အေး..ငါသဘကျခါ မပေးလို့မရတော့ဘူး သိနျးအောငျ နငျ့ဆီကပဲ ဆှဲရမှာပဲ သိနျးအောငျ နငျဒီမှာကွညျ့စမျးဟာ ” “ မိအေး နငျဘာလုပျတာလဲ ” သိနျးအောငျရဲ့တုနျတုနျရီရီအျောသံကွောငျ့ တငျတငျ အခနျးတံခါးရှိတဲ့အပေါကျကို တိုးကွညျ့လိုကျတော့ မွငျရတာက တငျတငျ့ကို မှငျသကျမိစသေညျ။
မအေးမိက ကိုသိနျးအောငျ ထိုငျနတေဲ့ ကုတငျဘေးမှာ ထမိနျကှငျးလုံးကွီးနဲ့ နောကျပွီး တီရှပျကို ခေါငျးကခြှတျနသေညျ။ ပါးစပျကလဲ
“ သိနျးအောငျ ငါနငျ့ဆီက ယူထားတာဟုတျတယျ အေး.ငါပွနျဆပျမှာ အခု ဆကျတိုကျရှုံးနလေို့ အတိုးမပေးနိုငျတာ ငါ့ကို မတငျစီးနဲ့ ငါဖာသညျလဲမဟုတျဘူး..” “ ဟဲ့ အေးမိ နငျသှားနျော သှားတော့…မဟုတျတာ မလုပျနဲ့ ငါတို့က သူငယျခငျြးတှဟောကို….. ” “ သိနျးအောငျ နငျ အောငျအောငျ့ကိုအားနာနတောမလား…အောငျအောငျလဲ သတော တဈနှဈကြျောလို့ နှဈနှဈတောငျရှိတော့မယျ ” ကိုသိနျးအောငျ ဘယျလောကျတားတား မအေးမိကတော့ ဘရာကိုပါ ခြှတျလိုကျပွီ၊ အပွငျကနေ ကွညျ့ရတာ ရငျတုနျစရာပဲ၊ တငျတငျ လူလာလားလို့ အဝငျတံခါးကိုလဲ ကွညျ့ရသေးသညျ။ ခနျးစီးကနေ ပွနျကွညျ့တော့ မအေးမိ ကိုသိနျးအောငျရှမှေ့ာ ကိုယျတုနျးလုနျးကွီးနဲ့ ခါးထောကျပွီး သူ့စောကျပတျကို ရှတေို့းရငျး…….. “အေးမိ နငျပွနျတော့ဟာ…. ” “ ဘာလဲ.သိနျးအောငျ ငါကမုဆိုးမ‚မလို့လား၊ နငျ့သူငယျခငျြး အောငျအောငျ ငါနဲ့ယူတာ ကိုးလလောကျပဲ နသှေားလိုကျ ရတာ ဒီမှာတှလေ့ား ဘာမှမဖွဈသေးပါဘူး။ ”
မအေးမိ သူ့နို့တှကေိုလဲ ကော့ပွ ခွထေောကျ တဈခြောငျးပါ ကားပွနသေေးတယျ “ ဟဲ့ သိနျးအောငျ တှလေ့ား အပြိုကို ယှဉျလို့ရသေးတယျ၊ နောကျပိုငျးကိုလဲ ကွညျ့လိုကျဦး ” မအေးမိ သူ့တငျတှကေို လှညျ့ပွပွီး၊ ကိုသိနျးအောငျ ရှမှေ့ာခါးကို ကုနျးပွနသေညျ။ ဟုတျပါတယျ မအေးမိ ကိုယျလုံးက တဈကယျကို အခြိုးအစားကပြါတယျ။ အသားကလဲ လတျတော့ ပိုကွညျ့ကောငျးတယျ။ နို့တှဆေိုတာလဲ သူ့နရောနဲ့သူ ခါးကလဲသေး ဗိုကျကလဲ မဖောငျးတော့ အခြိုးအစားကတြာပေါ့ တငျသားတှကေလဲ အိုးကောငျးလို့ပွော ရမဲ့ အလုံးကွီးမြိုး တဈဖကျဆီကို လုံးနတော လှမှလှ။ မအေးမိ ဖငျကွီးကုနျးပွတော့ ကိုသိနျးအောငျ စိုကျကွညျ့နတော တငျတငျ အပွငျက မွငျနရေတယျ။ မအေးမိ ကုနျးနတောကနေ မတျတပျရပျ သိနျးအောငျဖကျကိုလှညျ့ပွီး “ ဟဲ့ သိနျးအောငျ နငျအရငျ.မှုတျမလား ငါအရငျ.မှုတျပေးရမလား… ”
“ အာ အေးမိ မဖွဈဖူး ပွနျပါတော့ဟာ … ” မအေးမိ ကုတငျပျေါထိုငျနတေဲ့ ကိုသိနျးအောငျဆီ ငုံလိုကျပွီး ပုဆိုးကို ဆတျကနဲ ဖွညျလိုကျပွီးမှ “ နငျမူလကြီ လုပျမနနေဲ့ နငျ့ဟာနငျကွညျ့ဦး တောငျနပွေီ ” ဟုတျပ ကိုသိနျးအောငျ ဟာကွီးကို တငျတငျပါ လှမျးမွငျနရေသညျ။ တငျတငျ လီးတောငျနတောကို အပွငျမှာ အခုမှ စမွငျဖူးတာ။ မအေးမိ ကိုသိနျးအောငျ ပေါငျကွားကို အတငျးတိုး ဒူးထောကျပွီး ပုဆိုးကို အောကျက လှနျတငျလိုကျတော့တာပဲ။ကိုသိနျးမောငျ ဘာမှလုပျခြိနျတောငျမရဘူး။ အို…တငျတငျ ကွညျ့တောငျမကွညျ့ရဲတော့ဘူး။ မအေးမိရယျလေ ကိုသိနျးအောငျ လီးကို ပါးစပျထဲထညျ့တာဆို တငျတငျ ကွညျ့ဖူးတဲ့ အောကားထဲကလိုပဲ အခုဟာက ကိုယျသိနတေဲ့ ကိုသိနျးအောငျနဲ့ မအေးမိ အရှငျလတျလတျကွီး မွငျနရေတာ မအေးမိက လီးကွီးကနပွေီးတော့ ပေါငျရငျးတှကေို လြှာနဲ့ယကျနတော။ ကိုသိနျးမောငျ ကုတငျပျေါ ပကျလကျကွီး လှနျခလြိုကျတော့ တောငျနတေဲ့ လီးကွီးကို တငျတငျ သခြောခြောငျးကွညျ့မိတယျ ကိုသိနျးမောငျ လီးကွီးက မနတေ့ဈနကေ့မှ ကွညျ့မိတဲ့ ကားထဲက ကပ်ပလီ လီးကွီးလိုပါပဲလား၊ မအေးမိ ကိုသိနျးအောငျလီးကွီးကိုကိုငျပွီး အောကျကနေ မော့မော့ပွီး ဥတှကေို ယကျတာမြား ကွညျ့နတေဲ့ တငျတငျ တောငျမပွေီ့း လြှာကို ကစားမိတယျ။
“ ဟဲ့..သိနျးအောငျ.ကောငျးလား…လီးကလဲ.ကွီးလိုကျတာ…သိနျးအောငျရယျ… ” မအေးမိ ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ ကိုသိနျးအောငျ လီးကွီးကို ငုံပေးနတေယျ။ မွငျနရေတာ အသဲယားဖို့ ကောငျးလိုကျတာ မအေးမိ ပါးစပျအပွညျ့ လီးမဲမဲကွီးက တငျတငျလဲ ကိုယျ့ပါးစပျထဲ လီးကွီး ငုံထားရသလိုလိုကွီးပဲ။ မအေးမိ လီးကွီးကို ပါစပျထဲက ထုတျလိုကျ ပွနျထညျ့လိုကျ လုပျနတောမြား လနျ့ဖို့ကောငျးတယျ….အို…..ကိုသိနျးမောငျ မအေးမိကို လုပျထညျ့လိုကျပွီ မအေးမိ “ အု..အု ” နဲ့ ဖွဈနတော ပါးစပျ မဆနျ့တာကွီးကို အတငျးခေါငျးကို ဖိထားတယျ။ အောငျမလေး တငျတငျ ရငျတှခေုနျတာ တဒိနျးဒိနျးပဲ…….. “ သိနျးအောငျ နငျဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲ အသကျတောငျ ရှုလို့မရတော့ ဘူး ငါ့ကို ဖာသညျအောငျ့မလေို့လား၊ သသှေားတဲ့ ငါ့လငျတဈယောကျပဲ ခံဖူးတာဟဲ့ ”
တငျတငျကွညျ့နတေုနျး မအေးမိ ကုတငျပျေါတကျပွီး အပျေါကနေ ခတြယျ။ “ သိနျးအောငျ နငျ နဲနဲပါးပါး နမျးတာလဲ နို့စို့တာလေး လုပျပေးဦးလဟေယျ ငါပဲ အစအဆုံး လုပျပေးနရေမှာလား…. ” “ ငါဘယျလို စရမလဲ စဉျးစားနတော ” “ ဟောတော့ ,..သပေါတော့ သိနျးအောငျရယျ အဝတျလေး ဘာလေးခြှတျဦးလေ ကိုယျတုံးလုံးကွီးနဲ့ ငါက ဖာသညျမ ကွနတောပဲ သိနျးအောငျ နငျဘာကွောကျနတောလဲ ငါက နငျ့ကို ယူခိုငျးမှာစိုးလို့လား ဝေးသေး လုံးဝပဲ နငျ့အကွှေးတှလေဲ မရှျောခိုငျးဘူး ” ကိုသိနျးအောငျ ကမနျးကတနျး အကငြ်္ီခြှတျတယျ နောကျမအေးမိကို သိုငျးဖကျပွီး မကျြနှာတှကေို နမျးတော့တာပဲ နှုတျခမျးခငျြး နမျးရကျကနေ ကိုသိနျးအောငျ လကျတှေ မအေးမိ နို့တှကေိုပယျပယျနယျနယျကိုငျတော့ မအေးမိ ခှထိုငျနရောကနေ ဒူးထောကျပွီး ဖငျကိုလှုပျနတေယျ၊ ကိုသိနျးအောငျ လီးကွီးကို စောကျပတျနဲ့ ပှတျနတော့ဖွဈမယျ။
ခဏပဲ ကိုသိနျးအောငျ ပကျလကျပွနျဖွဈသှားပွီး၊ အို မအေးမိ.. မအေးမိတဈယောကျ ကိုသိနျးအောငျ လီးကွီးကိုငျပွီး၊ သူ့စောကျပတျကို ပှတျနတော၊ အိုး တဈကယျ အရသာ ယူနတောပါလား။ တငျတငျ စောကျပတျ ယားသလိုလို ယှသလိုလိုစလာပွီ။ တငျးတာတော့ တငျးနတော စကွညျ့နကေတညျးက ခုတော့ စောကျပတျ ကလိခငျြတာနဲ့ နောကျပွနျဆုတျပွီး တိုကျခနျးတံခါးကိုပိတျရတယျ။ ပွနျလာတော့ လိုကျကာ ဖွဲကွညျ့တာ ဒိနျးဆို ရငျတှတေုနျသှားတယျ မအေးမိက ကိုသိနျးအောငျ အပျေါကနေ ဘေးလကျနှဈဖကျထောကျပွီး ခါးကော့ ဖငျက ကုနျးကုနျးနဲ့ ဒူးကထောကျလို့။ အို ..မအေးမိ ကော့ထားတဲ့ ဖငျဖှေးဖှေး လုံးလုံးကွီးတှေ နောကျတော့ ဖောငျးပွီး ထှကျနတေဲ့ မအေးမိ စောကျဖုတျ။ အဲ့ဒီမှာ လီးမဲကွီးက တနျးလနျးကွီး၊ အိုး တဈကယျ့ ပကျပကျစကျစကျမွငျကှငျးပဲ တငျတငျ တံတှေး မြိူခလြိုကျပွီ၊ လကျက စောကျပတျကို စမျးနမေိတယျ အို..ငါတောငျစိုနပွေီ၊ မအေးမိ ဘယျလိုနမေလဲမသိဘူး။ မွငျနရေတာ လီးက ကွောကျစရာကွီး၊ မအေးမိ စောကျပတျက ဝိုငျးနတောပဲ။ လီးက မီးခြောငျးလုံးလောကျကွီး….အမလေးနျော…မအေးမိ လီးတနျးလနျးကွီးကို လှုပျလှုပျထညျ့နတောဖွဈမယျ။ ဖငျက ကွှလိုကျဖိလိုကျနဲ့ နောကျကို ဖငျတှနျးရငျ စောကျဖုတျ နှဈခွမျးကွား လီးဝငျနတောကွီးက အသဲယားစရာကွီး၊ တငျတငျစမျးနရေငျး ပှတျနရေငျးက စောကျဖုတျထဲ လကျခလယျ လကျညှိုး နှဈခြောငျးပူးပွီး ထညျ့လိုကျတယျ။ ဒီတော့မှ ကိုယျလဲနသောသလိုလို။
“ သိနျးအောငျရယျ.. နငျဟာကွီးက မတရားကပျြနပွေီ နငျလူမှဟုတျရဲ့လား နငျ့လီးကွီးက မွငျးလီးကွီးကနြတောပဲ .တငျးကပျြနတော အ အ အ အား…. ကြှတျကြှတျ နာလိုကျတာဟယျ….., ” မအေးမိ ဖငျကို ဖိလိုကျကွှလိုကျနဲ့ ဆကျတိုကျလုပျတော့မှ ကိုသိနျးအောငျ လီးမဲမဲကွီးက စောကျပတျ အဝကနေ တိုးတိုးပွီး ဝငျသှားတယျ။ နောကျဆုံး ကိုသိနျးအောငျ လီးကွီး အဆုံးထိ စောကျပတျထဲ ရောကျမှ မအေးမိ ရပျတယျ။ တငျတငျလဲ စောကျပတျထဲ လကျတှေ အဆုံးရောကျနပွေီ။ ကိုယျ့ဟာကိုတောငျ ဘယျလိုထညျ့လဲ မသိဘူး။ လကျနှဈခြောငျးလုံး စိုနပွေီ အရငျးကို ရောကျနပွေီလေ။ တငျတငျလဲ အဲ့အတိုငျးထညျ့ထားပွီး ငေးကွညျ့နမေိတယျ။ မအေးမိလိုသာဆို… အမလေး…..ကြောခမျြးစရာပါလားနျော….မကျြစိထဲ ကိုယျ့စောကျပတျလေးနဲ့ ကိုသိနျးအောငျ မီးခြောငျးဆိုဒျ လီးမဲကွီး …အမလေး… ကိုယျသာဆို ဖွဈပါ့မလားနျော မအေးမိလိုသာ ထညျ့ကွညျ့ရရငျ အငျး…တငျတငျ စိတျထဲ ကိုသိနျးအောငျ လီးဝငျတာ ဖီလျးယူကွညျ့တော့ ကောငျးသလိုလို နှိုကျနရေငျးက လကျမနဲ့ပါ အစိကိုပှတျနမေိပွီ။လီးကွီးနဲ့ဆို ဘယျလိုမြားလဲ…
“ သိနျးအောငျ..နငျတော့တျောတျောထနျနပွေီနျော နငျ့ဟာက ငါ့မှာ အသကျတောငျ မနဲရှုရတယျ၊ စောကျပတျထဲ ပွညျ့တာတငျ မဟုတျဘူး။ သားအိမျခေါငျးပါ ထောကျနပွေီ …” “ အမေိကလဲဟာ ဒီလိုပဲမဟုတျဖူးလား” ”ဘာဒီလိုပဲလဲ…ငါစောကျပတျ ဒီလောကျကပျြတာ နငျစားပီး နားမလညျ သလိုမလုပျနဲ့ ငါ့မှာ နငျ့ဟာကွီး ထညျ့ရတာ သတေော့မယျ… ” “ အေးပါ..အေးပါ…အေးမိရာ ငါနို့စို့ပေးမယျနျော.. ” “ အေး…အဲ့လိုလဲ အလိုကျသိဦး မအေးမိ တံတောငျလေး ထောကျပေးတော့ ကိုသိနျးအောငျက နို့စို့တာ မဟုတျပါဘူး။ မအေးမိ နှုတျခမျးတှကေိုစုပျပွီး လကျက နို့ကိုနယျတာ။ နှုတျခမျးတှေ စုပျနရေငျးက ဟော မအေးမိလှုပျနပွေီ၊ ဘယျလိုမြား လုပျ လဲမသိဘူး။ ဖငျလုံးပဲ လှုပျတာ၊ လီးကိုလိုးပေးနတော၊ အပျေါက နှုတျခမျးပဲ စုပျတာ၊ ဖငျကနပွေီး ခါးနဲ့လိုးပေးနတောဖွဈမယျ။ အို အိုး တကယျပါပဲ ကွှလိုကျရငျ လီးက စောကျပတျကနေ ထှကျလာလိုကျ မအေးမိ ဖငျနှဈခွမျး စိသှားလိုကျ လီးပွနျဝငျတော့ စောကျပတျပွဲပွဲကွီး နောကျကို ထှကျနတော၊ အို တျောတျောကောငျးမှာပဲ၊ တငျတငျ စောကျပတျကလေးထဲကို လကျနှဈခြောငျး ပူးထညျ့ရငျး သုံးခြောငျးထညျ့ရငျ ကောငျးမလား တှေးမိပါတယျ။ သုံးခြောငျးဆို ပွဲသှားရငျဒုက်ခ ဟောဟော မအေးမိ စောငျ့ကွောငျ့ထိုငျပွီး ဆောငျ့နပေါလား။
“ သိနျးအောငျရယျ…ကွီးလိုကျတဲ့ လီးဟယျ.,. ” “ အငျ့ အငျ့ ကောငျးလား ရော့ရော့ ကောငျးလား အီး အား ” သဈငုတျထိုငျဆောငျ့ပုံလေး၊ မအေးမိ ဆောငျ့နတော တငျတငျ တှတေ့ာတော့ ကွကျဖ ခှပျသလို ဆောငျ့နတော၊ စောကျပတျက လီးကို အပျေါက စှပျပွီးထညျ့နတောပဲ… “ အေးမိ လုပျ လုပျ လုပျဟာ မွနျ့မွနျ….” “ သိနျးအောငျ နငျကောငျးနပွေီလား..နဦေးလေ မပွီးနဲ့ဦး ငါလဲ တူတူကောငျးမှာပေါ့ ဟငျ့ ဟငျ့ နငျ့လီးကွီးနဲ့ ဟငျ့ဟငျ့ မပွီးနဲ့ဦး…” မအေးမိ ပွောပွီး မဆောငျ့တော့ဘူး ကိုသိနျးအောကျပျေါမှာ ထပျပွီးအိပျနတေယျ။ ကိုသိနျးအောငျ အောကျကနေ ကော့ကော့လိုးနတော အားမရဘူး။ “ အေးမိ နငျကလဲဟာ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ.. ” “ သိနျးအောငျရယျ..ငါလဲ ပွီခငျြတာပေါ့ ငါ.အလိုးမခံရတာ နငျ့သူငယျခငျြး သကေတညျးက ငါ့ကိုလဲစာနာပါဦး။ ” “ အငျး ” မအေးမိက ဒီလိုတော့လဲ သနားစရာပဲသူ့ယောကငြ်္ားကလဲ စောစောစီးစီး သရှောတယျ။ အေးလေ တငျတငျဆို အလိုးတောငျ ခံဘူးတာ မဟုတျဘူး။ အယျ ကိုသိနျးအောငျ မတျတပျရပျပွီ၊ တငျတငျ မကျြလုံးဝိုငျးသှားတယျ။ ထိုငျပွီး မအေးမိ ပေါငျကွားထဲ ခေါငျးထိုးနပွေီ။
ဘယျလိုဖွဈကုနျပါလိမျ့ မအေးမိလဲ ခွထေောကျတှေ ကားလို့ “ အို..အို..သိနျးအောငျရယျ ဘယျလိုလုပျနတောလဲ အရမျးမစုပျရဘူး နာတယျ ” “ ဟငျ ,.ဘာစုပျတာလဲ တငျတငျ စဉျးစားတော့၊ အငျး…မအေးမိ အစိကိုမြား စုပျတာလား တငျတငျ အသဲတှေ ယားတကျလာတယျ ခေါငျးကွီးက ကှယျနတေော့ သခြောမမွငျရဘူး။ “ အို အိုး ကောငျးလိုကျတာ အား အား နငျ.စောကျဖုတျ.မှုတျဖူးလား..သိနျးအောငျ ” ကိုသိနျးအောငျ ဘယျလိုလုပျနလေို့ မအေးမိ ဘာတှမေေးနတော တငျတငျစဉျးစားမရဘူး။ ကိုသိနျးအောငျကတော့ ခေါငျးကိုမဖျောဘူး။ မအေးမိ မှယေူ့ကွီးကို တဖုနျးဖုနျး ရိုကျနတေယျ၊ တျောတျောဖီးလျတှနေ့တေယျ ထငျတယျ။ အငျး ငါ့ဟာလေး ကိုသိနျးအောငျသာ အဲ့လိုလုပျပေးရငျ တှေးရငျး၊ တငျတငျ ရငျထဲ တငျးကပျြနတေယျ။ စိတျကူးထဲ မအေးမိ နရောမှာ ခဏဝငျကွညျ့မိသညျ။ အို…စောကျပတျ တငျးလာပွနျပွီ ညှဈနမေိပွနျပွီ အဲ့လို အယကျခံဘူးခငျြလိုကျတာ၊ “ အ အ အို အိုး မလုပျပါနဲ့ အဲ့လို မလုပျပါနဲ့ အား အီး အား စောကျဖုတျပဲ လုပျပါ အား အဟငျ့ ဟငျ့ သိနျးအောငျ ရယျ စောကျဖုတျပဲ လုပျပါ ”
ဟောတော့ ဘယျလိုဖွဈနတောပါလိမျ့။ အို..ကိုသိနျးအောငျ.မအေးမိ.ဖငျလုံးတှကေိုငျပွီး.အောကျက.ယကျနတောပဲ၊ ဒါဒါ ဒါဆို ဟိုအပေါကျပဲ စောကျပတျက အပျေါမှာပဲ အို ကိုသိနျးအောငျကွီး မအေးမိ ဖငျပေါကျကို ယကျနတောပါလား၊
“ အို….သိနျးအောငျ တျောပါတော့…ငါ့ကို လိုးပေးပါတော့..အို..အိုး..ငါ့ကို.လိုးပေးပါတော့..ငါ့ကို.မညှငျးဆဲပါနဲတော့။ မအေးမိ တျောတျော ဖီးလျတကျနပွေီထငျတယျ။ အငျးလေ…တငျတငျ တောငျ တျောတျော ဟုတျနပွေီ။ “ အား.အား.အမလေး.အ…အ.သပေါပွီ သနားပါဦး..ငါ့ကိုသနားပါဦး..အမလေး အရမျးပဲဟယျ အောငျ့အောငျ့သှားတာပဲ ဖွေးဖွေးနျော..သိနျးအောငျ.ဖွေးဖွေးလုပျ.နငျစားတတျရငျ.တဈညလုံး.စားလို့ရတယျ ၊မလောပါနဲ့ဟာ.ဖီးလျနဲ့.လိုးစမျးပါ…ဒါဆို.နငျမပွနျနဲ့နျော.နမှောလားပွော ” “ အေး.မပွနျဘူး.နငျပဲ.လိုးနိုငျမလား.ငါပဲခံနိုငျမလား.ဘယျသူ ဆေးရုံရောကျ
မလဲ.မသိဘူး ” ဟောတော့ တငျတငျကြောခမျြးသှားပွီ။ မဖွဈဖူး ကိုယျကပွနျမှဖွဈမှာ ခုတောငျတျောတျောကွာနပွေီ။ အမေ လိုကျလာမှ ဟုတျပဖွေ့ဈနမေယျ။ တငျတငျ ထပျကွညျ့ခငျြပမေဲ့ မဖွဈတော့ပါဘူးလေ… “ အ အ ကောငျး…ကောငျး…အငျး အငျး…အဲ့တိုငျး…အဲ့အတိုငျးပဲ လိုးပေး အဲ့တိုငျး လိုးပေး…. ” ဟော လိုးနပွေီ ကွညျ့လို့ကလဲ ကောငျးလိုကျတာ။ မအေးမိ ပေါငျလေးကားလို့ ကိုသိနျးအောငျကလဲ ကုတငျပျေါ လကျထောကျပွီး အောကျကနေ တဈခကျြခွငျး လိုးနတော။ “ အ..အ..ကောငျးလိုကျတာ…ကောငျးလိုကျတာ နငျရော နငျဘယျလိုလဲ …. ငါ့စောကျပတျ ကောငျးရဲ့လား… ဟဲ့ အီး အီး ….ဟဲ့.ငါ့စောကျပတျ ကောငျးရဲ့လား ပွောလေ ပွောလေ ပွောလိုး ပွောလိုး.အ..အ..လိုးကောငျးလား ” တငျတငျ စိတျကိုလြှော့ နောကျဆုံး အဝ ကွညျ့ပွီး၊ အိမျပွနျလာခဲ့ရတယျ မကျြစိထဲမှာ မအေးမိကို ကိုသိနျးအောငျ လိုးနတောပဲ တဝဲလညျလညျ မွငျနတေယျ။
သူတို့ ဘယျလောကျထိ လိုးကွမလဲ၊ ဘယျလိုတှရေော လိုးဦးမှာလဲ၊ အောကားထဲကလို ပုံစံပေါငျးစုံ လိုးမှာလား၊ ဟူး….တငျတငျ စောကျပတျ တငျးတာ ရှတာကလဲမပြောကျ၊ ကိုငျမိပွနျပီ၊ ဟငျး ငါ့ကိုမြား ကိုသိနျးအောငျ လီးမဲကွီးဆို အို..တငျတငျ တျောတျောနဲ့အိပျမရ ဟိုဘကျလှညျ့ ဒီဘကျလှညျ့နှငျ့စိတျက ကိုသိနျးအောငျနဲ့ မအေးမိကိုသာ မွငျနမေိသညျ။ လကျကလဲ စောကျပတျကို ကိုငျရငျး ဟိုပှတျ ဒီပှတျ လုပျထားတော့ စောကျရညျတှေ ဟိုကပျဒီကပျနဲ့ မနကျတော့ ထမိနျလြှျောဦးမှ ဒီလိုနဲ့သနျးခေါငျကြျောမှ အိပျပြျောသညျ။ တငျတငျ ရောကျသှားတော့ ဦးလေးကြျော ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျနတောတှတေ့ယျ၊ စားပှဲပျေါမှာ ပုလငျးတှေ ခှကျတှေ ဟငျးပုဂံတှနှေငျ့ “ ဟဲ့ တငျတငျပါလား၊ ငါ့တူမကွီး ဘာလာလုပျတာလဲ၊ မတှတေ့ာတောငျကွာလို့ အပြိုကွီးတောငျဖွဈနပွေီပဲ ……” “ ဦးလေးကြျောရော သင်ျဘောကနေ ဘယျတုနျးက ပွနျရောကျတာလဲ…. သမီးတို့ သိတောငျမသိဘူး..ဘာလဲ.. လကျဆောငျ ပေးရမှာစိုးလို့လား..” “ ဟေး..ဟေး..လုပျပွီ..ပါပါ့ဗြာ….ဒီမရောကျခငျ.စင်ျကာပူ ဝငျတော့ တီရှပျ တှပေါတယျ.ဦးလေး တဈနကေ့မှရောကျတာ ဒီနမှေ့ လမျးထှကျဖွဈတာ၊ အဲ့တာ မောငျသိနျးအောငျအတှကျဆိုပွီး ဝီစကီလေး လာပေးတာ ”
“ ဦးလေးကလဲ ကိုကွီးကမှ မသောကျတတျတာ ဦးလေးကြျော သောကျ ခငျြတိုငျး ” “ အဟေး.ဟေး.သူလဲ ဦးလေးကြျောနဲ့မှ သောကျဖွဈတာပါ၊ သမီး သူလာတာစောငျ့လေ ဦးလေး ကိုတငျ့ဆနျးတို့ဘကျ သှားနှုတျဆကျလိုကျဦးမယျ ..ဟော ပွနျလာပွီ မောငျသိနျးအောငျရေ ဦးလေး …ကိုတငျဆနျးတို့ဘကျ လှညျ့လိုကျဦးမယျ သိတယျမလား စိတျဆိုးနဦေးမယျ ” ဦးလေးကြျော ထှကျသှားတော့ ကိုသိနျးအောငျ တံခါးထိ နှုတျဆကျပွီး၊ ခကျြထိုးတယျ တငျတငျ နဲနဲတော့ ထူးဆနျးသှားတယျ။ ကိုသိနျးအောငျ ဘာမှမပွောပါပဲ စားပှဲပျေါက အရကျခှကျကို ကောကျမော့တယျ၊ တငျတငျကို စိုကျကွညျ့ပွီးမှ ကပျလာပွီး…ညီမလေး နငျမနကေ့ ဘာတှမွေငျထားလဲ…အစမရှိအဆုံးမရှိ မေးတော့ တငျတငျ လနျ့သှားတယျ။ ထဈထဈငေါ့ငေါ့နဲ့… “ဟို..ဟို..တငျတငျ ဘာမှမမွငျပါဘူး ကိုကွီး၊ တငျတကျ ဘာမှမမွငျပါဘူး … ” ကိုသိနျးအောငျ လကျက ဖတျြခနဲဆို တငျတငျကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျ သိမျးဖကျပွီး၊ “ တငျတငျ ညီမလေး ကိုကွီး ဒျေါလေးနဲ့ တှခေဲ့တယျ မနကေ့ ဒီမှာ ထိုငျစောငျ့နတောတဲ့ ….မညာနဲ့တော့…” သှားပွီ…တငျတငျ မနကေ့ အမကေို့ ကိုသိနျးအောငျကို ထိုငျစောငျ့နရေတာကွာလို့ ပွနျလာတာလို့ ပွောခဲ့တာ။ ဒုက်ခပဲ တငျတငျ ဘာလုပျရမှနျးမသိတော့ “ဟို..ဟို..ကိုကွီး တငျတငျ ဘာမှမမွငျပါဘူး ကိုကွီးရယျ တဈကယျပါ တဈကယျပါနျော……” ကိုကွီးက တငျတငျပါးကို ကပျလိုကျပွီးမှ… “ ညီမလေး အေးမိပွနျမှ ပွနျ တာလား…” “ မဟုတျပါဘူး အစောကွီးပွနျတာပါ…..,” “ ဘယျခြိနျလဲ အေးမိ ပွီးမှလား ” “ အို မဟုတျဘူး မဟုတျဘူး တငျတငျ မသိဘူး…” ကိုကွီး တငျတငျ့ကို တငျးနအေောငျ ထပျဖကျလိုကျပွီး၊ တငျတငျ့ဖငျကွားကို လကျနဲထိုးပွီး၊ ဖငျပေါကျတညျ့တညျ့ကိုဖိတာ မလှတျတော့ပဲ “ ဒါဆို အေးမိ‚ဖငျကို ထညျ့တုနျးကလား” ပွောရငျး တငျတငျ ဖငျဝလေးကို လကျနဲ့ကလိတော့တာ တငျတငျ လနျ့သှားတယျ၊ “ အို ဟုတျဖူး ဟူတျဖူး တငျတငျ မသိဘူး…” “ ညီမလေး မညာနဲ့နျော ကိုကွီးသိတယျ…..ဟိုအပေါကျမှာ ရပျနတောမလား၊ တငျတငျ့ခေါငျးစီးခြိတျကလေးတဈခု ကနျြခဲ့တယျ…” “ အို သိဘူး သိဘူး ကိုကွီး တငျတငျကို လှတျပါ…တောငျးပနျပါတယျ ကိုကွီးရယျ…”
“ တငျတငျ ကွညျ့ကိုကွညျနတောပါ ဒါဆို ဖငျလိုးတာမဟုတျရငျ စောကျပတျလိုးတာရော…..” ကိုကွီးက အဲ့လိုမေးပွီး ရှကေ့နေ တငျတငျ ထမိနျကွား လကျထိုးပွီး ပငျတီအောကျကို နှိုကျတယျ၊ “ ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး တငျတငျ မတှဘေူ့း၊ မကွညျ့ပါဘူး ..” တငျတငျ ဘယျလိုငွငျးငွငျး ကိုကွီးလကျက စောကျပတျကိုပှတျပွီး နှိုကျနပွေီ၊ ပွီးတော့ တငျတငျ့ကို အတငျးဖကျပွီး၊ ကိုကွီးအခနျးကို သှားတော့ သှားပွီဆိုတာ သိလိုကျပွီ၊ ကိုကွီးက တငျတငျကို ကုတငျပျေါ အတငျးတှနျးခတြယျ၊ ကုတငျပျေါ လဲသှားရော အပျေါကနေ တဈခါထဲလှုပျမရအောငျ ဖိထားတာ တငျတငျ အရမျးကွောကျနမေိပွီ၊ ကိုကွီး ကုတငျပျေါကနေ အျောရငျရော ဘယျသူလာမှာလဲ အခနျးတံခါးက ပိတျထားတဲ့ဟာ၊ ကိုကွီး ဖိထားတာကနေ တီရှပျကို စှဲလှနျလိုကျတော့ ဘရာတှပေျေါကုနျပွီ ဘရာကို ခပျကွမျးကွမျး ဆှဲတငျပွီးတော့ တငျတငျ နို့သေးသေးလေးတှကေို တအားစုပျတော့ တငျတငျ အသကျရှုမှားပွီ..၊ “ ကိုကွီးရယျ မလုပျပါနဲ့နျော တငျတငျ တောငျးပနျပါတယျ ကိုကွီးတို့ဟာ တငျတငျ ဘယျသူမှမပွောပါဘူး ” “ အေး အဲ့ဒါဆို မှနျမှနျပွော ငါအေးမိနို့စို့တာ မွငျတယျမလား ဟုတျတယျမလား နငျမွငျတယျ နငျလဲခြှတျ ငါစို့ပွမယျ..”
ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ တီရှပျကို အတငျးလှနျခြှတျတော့ တငျတငျ မတတျနိုငျတော့ လကျတှဆေနျ့ပွီး ကြောကော့ပေးလိုကျရသညျ။ တီရှပျခြှတျပွီး ကြောမခခြငျ နောကျကနေ ဘရာခြိတျကို ဖွုတျနပွေီ၊ အပျေါပိုငျး ဟောငျးလောငျးလေး ဖွဈသှားတော့ ကမနျးကတနျး လကျနဲ့ အုပျထားပမေဲ့ ပျေါနတေဲ့ နရောအစုံကို ကိုကွီးကလြှောကျနမျးနတေော့ တငျတငျ ဘယျနရော ကာရမှနျးမသိတော့ နို့ကိုအုပျထားပွီး ဘယျညာလူးနရေသညျ။ တငျတငျ ရုနျးနရေငျး ကိုကွီးက အောကျကထမိနျကို လှနျတငျနသေညျ။ တငျတငျ အပျေါတကျလာတဲ့ ထမိနျကို ဆှဲခတြော့ နို့ကို စို့မိသှားပွီ။ လကျကလဲ ပွနျတငျလို့မရတော့ ကိုကွီးက လကျကို ဖိထား လပွေီ။ ညာဘကျ နို့အုံတဈဖကျက ကိုကွီး ငုံထားတော့ ထူးခွားတဲ့ အရသာ ကို တငျတငျ စသိရပွီ။ နှေးနသေလိုလို ပွီးတော့ လြှာနဲ့ထိုးနတော၊ ကိုကွီး ခေါငျးကို လကျနဲ့တှနျးဖယျဖို့ လုပျလိုကျတာနဲ့ တငျတငျ့ နို့သီးခေါငျးလေးကို မလှတျတမျး စုပျယူထားတယျ နောကျလကျတဈဖကျကလဲ နို့ကိုကိုငျနပွေနျပွီ။ တငျတငျ့ နို့တှကေို ကိုကွီး အပိုငျသိမျးလိုကျပွီ။
တငျတငျ ဘာမှမတတျနိုငျတော့ နို့စို့တော့ တငျတငျနို့ တငျးတငျးလေးမှ နှေးကနဲ နှေးကနဲ လိုနဲ့ တငျတငျ အသကျရှုမှားပွီး ရငျဘတျက မငွိမျတော့ဘူး။ အလိုလို ကော့နသေလိုပဲ အျောခငျြသလိုလိုကွီး၊ ကိုငျမိကိုငျရာ ကိုကွီးခေါငျးကို ကိုငျနမေိသညျ။ တငျတငျ နို့စို့တဲ့ အရသာခံတုနျး အောကျက တငျတငျ့ ဆီးခုံခှကွားထဲ လာထောကျနသေညျ။ အို..ကိုကွီး ဘယျခြိနျက တငျတငျ ပေါငျကွားထဲ ရောကျနတောလဲ…တငျတငျ ပေါငျကလေးတှကေလဲ ကားပေးသလိုဖွဈနပွေီ.. အို..တငျတငျ ထမိနျလဲ ခါးမှာရောကျနပွေီ၊ အို..ရှကျလိုကျတာ …. ပငျတီခှကို ဘေးဖယျနပွေီ လာထိနပွေီ “ အဟငျ့ အငျး ဟငျ့ ကိုကွီး ဟငျ့အငျး ” စောကျပတျကလေးထဲ တိုးဝငျလာတာ ကိုကွီးလကျဖွဈမညျ။ နို့စို့နတော ခဏရပျလိုကျပွီး၊ “ အေးမိကို ဘာဂြာမှုတျတာ ဘယျလိုမြိုးလဲ ညီမလေး ကိုကွီးကို ပွောပါဦး… ” ” အငျ့အငျး သိဘူး တငျတငျ သိဘူး၊ ဟငျ့ ဟငျ့ အို ကိုကွီး ” အောကျကိုလြှောခပြွီး ပငျတီခှကွားကိုဖယျပွီး၊ တငျတငျ့ စောကျပတျကို လုပျနပွေီ..
“ ကိုကွီး…ကိုကွီး..မလုပျပါနဲ့ တငျတငျ မသိဘူး… မသိဘူး အ အအားအား ဟငျးဟငျး လုပျပါနဲ့ ကိုကွီးရယျ ” ကိုကွီးလကျတှကေ ပငျတီကို ဆှဲရငျးဆှဲရငျး ပငျတီက ဖငျကနကြှေတျပွီး ပေါငျလညျထိ ရောကျသှားပွီ၊ ခေါငျးက ပငျတီအောကျက ဝငျလာပွီး၊ တငျတငျ စောကျပတျကို ကွညျ့နတေယျ အို..တငျတငျ ရှကျလိုကျတာ လကျနဲ့ လှမျးအုပျထားမိတယျ၊ ညီမလေး စောကျပတျ ကလေးက ခဈြစရာလေး အမှေးတှကေလဲ ပါးပါးလေးနဲ့ “ အို…ကိုကွီး ဘာတှလြှေောကျပွောနတောလဲ ” “ လူသာငယျပမေဲ့ စောကျပတျနှုတျခမျးသားတှကေ ခဈြစရာကွီးကှာ အကွီးကွီးပဲ၊ ကိုကွီး ယကျခငျြလိုကျတာ လကျဖယျပေးနျော.,..”
“ဟငျ့အငျး ကိုကွီးမလုပျပါနဲ့ တငျတငျကွောကျလို့ မလုပျပါနဲ့ ” တငျတငျပွောနပေမေဲ့၊ ကိုကွီးက တငျတငျဖုံးထားတဲ့ လကျတှကေို အတငျးဆှဲဖယျနပွေီ။ ပွီးတော့ ကိုကွီးလေ ကိုကွီး တငျတငျ ဖုံးထားတဲ့ လကျတှကေို ယကျပေးနတေယျ။ တငျတငျမကျြလုံးပဲ ပိတျထားတော့တယျ။ “ အား ကိုကွီး မကောငျးဘူး အီး အီး အူး အို အိုး ” တငျတငျ အုပျထားတဲ့ လကျတှကေို အဖြားကနေ တှနျးဖယျပွီး၊ ပျေါလာတဲ့ဖငျဝလေးကို သူ့လြှာနဲ့ယကျတာ တငျတငျ မတတျနိုငျတော့ဘူး။ အကုနျလှတျလိုကျပွီး၊ ကိုကွီးခေါငျးပဲ ကိုငျနမေိတယျ။ တငျတငျ လကျက ဖုံးထားတာ လှတျတာနဲ့ စောကျပတျကို စုပျတယျ ပွီးတော့ အထဲကိုလဲ လြှာကွီးနဲ့ ထိုးထိုးပေးတာ တငျတငျ သတေော့မှာပဲ…. စောကျပတျလေ စောကျပတျကလဲအတငျးဖွဈနတော အဲ့လြှာကိုပဲ ကော့ပေးနမေိတယျ။ ဟော တကျလာပွနျပွီ အစေ အစေ့ အိုး ဘယျလိုလဲ ကိုကွီးရယျ…သူစောကျပတျကို လကျနဲ့ဖွဲထားပွီး ဖွဲထားပွီး…အိုအကုနျ အကုနျပဲ စောကျပတျ တဈခုလုံး မကနျြတော့ပါဘူး…တငျတကျ မရှကျနိုငျတော့ဘူး ကော့ပေးမိနပွေီ တငျတငျ စောကျပတျလေးကို အယကျခံရတာ ဘယျလိုလဲဆိုတာ သိပါပွီ ကိုကွီးရယျ…ယကျပါတော့ အားရပါးရသာ ယကျပေးပါတော့။ တငျတငျ့ စောကျပတျကလဲ ယားလှပွီ… “ အီး ဟငျးဟငျး ကိုကွီးရယျ အတငျးပဲ အို..ဟငျ့ ဟငျ့… ” “ တငျတငျ ကလေး အရမျးကောငျးလာပွီလား၊ စောကျရညျလေးတှေ စိမျ့နလေိုကျတာ ကိုကွီးယကျလိုကျမယျ ” “ အို ကိုကွီးရယျ..” တငျတငျ့ စောပျပတျကိုဖွဲပွီး အတှငျးထဲကို လြှာနဲ့လုပျနပွေနျပွီ။ တငျတငျ တအားကို အရညျရှဲနပွေီ။ ကိုကွီး စောကျပတျကို မှနေတော ရပျလိုကျပွီး၊ “ တငျတငျ ကလေး ကိုကွီးတို့ ခဈြရအောငျနျော… ” “ အို ကိုကွီး တငျတငျ
ကွောကျတယျ….” “ အို ကလေးကလဲ ဖွေးဖွေးလေးပဲခဈြမှာ မကွောကျနဲ့နျော…” ကိုကွီး ခေါငျးကိုမော့ပွီး ထတော့ ပငျတီလေးကိုပါ တဈခါထဲ ခြှတျ ယူသှားသညျ။ ပွီးတော့ ပုဆိုးကို ခြှတျနတောကွညျပွီး တငျတငျ ရငျတှေ တုနျနပွေီ ငွငျးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ တငျတငျ သဘောပေါကိလိုကျပွီ။
တငျတငျ့ပေါငျကွားမှာ ကိုကွီး ဒူးထောကျထိုငျလိုကျတော့ အို…လီးကွီးကို သခြောမွငျနရေတယျ မအေးမိကို လိုးတုနျးက ဒီလောကျမသဲကှဲဘူး။ ခုတော့ ဒါကွီးနဲ့ ကိုယျ့ကိုလိုးတော့မယျ တငျတငျ ဖငျစအိုလေး ကြုံ့ခနဲဖွဈသှားတယျ။ ကိုကွီးက သူ့လီးကို တံတှေးတှနေဲ့ နယျနတော ကွညျပွီး တငျတငျ ရငျတှတေုနျလှနျးလို့ ပေါငျတှကေို ကားပေးမိတယျ၊ စောကျပတျဝ ပှငျ့နတေော့ ကိုကွီး သူ့လီးကိုငျပွီး စောကျပတျဝကိုသှငျးပွီ၊ တငျတငျ မကျြလုံးတှကေို စုံမှိတျထားတယျ နှုတျခမျးတှလေဲ ကိုကျထားမိတယျ။ ကိုကွီးက လီးကိုမထညျ့ဘူး၊ စောကျစိကို လီကွီးနဲ့ ပှတျပေးနတေော့ တငျတငျ ကွောကျစိတျနဲနဲပွသှေားတယျ၊ မကျြလုံးဖှငျကွညျ့တော့… “ ကလေး အစိက ခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတာ လုံးလုံးလေး၊ ကိုကွီး လီးထိပျက ကောငျးလား ထိရဲ့လား ကလေးရယျ ထိရဲ့လား အစိလေးကို … ” “ အို ကိုကွီးကလဲ ထိနတေဲ့ဟာကို ,.ထိအောငျလုပျပွီးတော့ ဟငျ့ တျောပွီ အဲ့ကိုမလုပျနဲ့တော့ ကိုကွီးရာ … ” “ဒါဆို.. ဘယျကိုလုပျရမလဲ စောကျပတျကလေးကို လုပျရတော့မလား…” “ အို..ဘာတှပွေောနတောလဲ သမီး ရှကျလို့သတေော့မယျ ” လီကွီးက စောကျပတျအဝမှာ ပှတျနတေော့ တငျတငျ တမြိုးကွီးဖွဈနပွေီ။
အထဲထညျ့တာကို တောငျ့တမိနသေလိုလို ကော့ပေးခငျြသလိုလိုဖွဈအောငျ လုပျနတောဖွဈမယျ တမငျစောကျပတျယားအောငျ လုပျနတော။ နှုတျခမျးသားတှကေို ကျောကျောထိုးနတေယျ၊ “ ကလေး စောကျပတျက မို့မို့ဖောငျးဖောငျးကွီးကှာ အရမျးထနျတဲ့ စောကျပတျမြိုးပဲ တဈနကေုနျ အလိုးခံနိုငျတဲ့စောကျပတျမြိုး… ” “ အို ကိုကွီးကလဲ ဘယျလိုတှပွေောနတောလဲ သမီးက အပြိုလေးနျော ရှကျလို့သတေော့မယျ ” “ အို ကလေးက ဘာတှရှေကျနတောလဲ ကိုကွီးကတော့ ခဈြတော့မှာ ဖုတျဖုတျကလေးကို လကျနဲ့ဖွဲပေးထားပါလား၊ ကိုကွီး နဲနဲသှငျးခငျြပွီ ကလေးဟာလေး မနာအောငျဖွဲပေးနျော ” တငျတငျ စဉျးစားမနတေော့ ဘာမှလဲ ပွောမနတေော့ လိုးမယျဆိုတာ သိနပွေီ အဲ့တော့ လကျနဲ့ အသာပဲ ဖွဲပေးထားလိုကျတော့တယျ။ တငျတငျ ကားပွီးဖွဲတာနဲ့ လီးကွီးက လိုကျတိုးလာတယျ၊ “ အငျ့.ဖွေးဖွေးနျော တငျတငျ.ကွောကျတယျ.”
နာတော့မနာဘူး။ အေးလေ ဝငျလဲမဝငျသေးဘူးဆိုတာ တငျတငျသိပါတယျ။ လီက အဝမှာပဲ ဝငျနသေေးတာ၊ “ အေးပါ ကလေးရယျ ကိုကွီး ဖွေးဖွေးလေးပဲ ခဈြပေးမှာပါ ” ပွောပွီး၊ တငျတငျ့နို့ကို ကုနျးယကျတော့ အောကျကနေ လီးကပါ တိုးဝငျလာတယျ။ ဒီတဈခါတော့ ဝငျပွီ၊ “ အ .အ,ကိုကွီး အရမျးမလုပျနဲ့ …” “ အငျး ဝငျပွီနျော ကလေး၊ စောကျပတျကလေးရေ ဝငျတယျမလား….” တငျတငျ့ကို ကွညျ့ပွီး ပွောတော့ တငျတငျ ရှကျသလိုကွီးပဲ ဟော လုပျပွီ လုပျပွီ ဖိတိုးနတော တငျတငျလဲ ငွိမျနပေေးလိုကျတယျ။ ဝငျတော့ဝငျသလိုပဲ ဒါပမေဲ့ အားသိပျမရသလို ဖွဈနတေယျ “အား.ကိုကွီး.ကိုကွီး.နာတယျ ဟငျ့ဟငျ့” ကိုကွီး ဖိထိုးနရောကနေ အားနဲ့ဆတျကနဲ ထိုးလိုကျတာဖွဈမယျ။စောကျပတျထဲကို ဗဈြကနဲ မညျသလား အောငျ့မရေ့တယျ ဝငျတာ ဒီတဈခါတကယျဝငျတာ…စောကျပတျ အဝမှာတငျးပွီး တဈဆို့ကွီးဖွဈနပွေီ .. “ နာသှားလား ကလေးရယျ ” “ အို နာတာပေါ့ အရမျကွီးလုပျတာပဲ ဖွေးဖွေးလုပျပါဆို…” “အငျး.နောကျဆိုမနာတော့ဘူး ” ကိုကွီး တငျတငျနို့ကို စို့ပေးနပွေနျပီ ဒီလိုကွီး နရေတော့လဲ တဈမြိုးကွီး လိုးရငျလဲ လိုးပေးတာ မဟုတျဘူး။ တငျတငျ့စိတျက အလိုးခံခငျြနပွေနျပီ .. “ ကလေး နာသေးလား ကိုကွီး ခဈြဦးမယျနျော…ကလေး စောကျဖုတျကလေးက ကောငျးတယျမလား၊ နို့လေးတှကေို ထောငျနတောပဲ ”
“ အို ကိုကွီးကလဲကှာ…သမီးကို ဒီတဈခါ ဖွေးဖွေးလေးပဲ လုပျနျော…အား တအားမထညျ့နဲ့ မနာအောငျ လို့…အငျး အ အ..အ တျောတော့ အဲ့လောကျ တျောတော့ အဲ့လောကျ ပဲ ” “ အငျး မနာဘူးဆိုတော့ ကောငျးတာပေါ့ ဟုတျလား ကလေး…” ကိုကွီးကလဲ ဘာမှနျးလဲမသိဘူး ကိုကွီးက တငျတငျကို အသာလေးလုပျ နတေော့ တငျတငျလဲ အရသာရှိလာသလိုပဲ စောကျပတျအဝမှာ တငျးကနဲ တငျးကနဲ ဖွဈနတော ကောငျးသလိုလေး။ ကိုကွီး စောကျပတျထဲကို ဒဈကွီး ဝငျသထကျဝငျအောငျ လိုးနတော တငျတငျ သိပါတယျ။ တငျတငျ ကိုယျတိုငျလဲ ထပျထပျဝငျစခေငျြနတော … “ ကလေး ကောငျးလား၊ ကိုကွီး နဲနဲလေး ထပျခဈြလိုကျခငျြပွီကှာ ” “ အငျး ဖွေးဖွေး နျော သမီး ကွောကျတယျ ကိုကွီးရယျ ” “ အို ကလေးကလဲကှယျ ဘာမှမကွောကျနဲ့ အစကဒီလိုပဲ အရမျးကောငျးအောငျခဈြပွမယျ ကဲ ” “ အား အား အီးဟီး သပေါပွီ ကိုကွီးရယျ သပေါပွီ ဘယျလို လုပျလိုကျတာလဲ ဟငျ့ ဟငျ့ နာလိုကျတာ အရမျးနာတယျ ” ဟငျ့… တငျတငျ တကယျကို နာတာပါ။ ကိုကွီးက လီးကွီးကို စောကျပတျကနထေုတျပွီး အတငျးလိုးထညျ့လိုကျတာ တငျတငျ့ စောကျပတျအသားကို လီးခြောငျကွီးက အရှိနျနဲ့ ထိုးဖွဲလိုကျသလိုပဲ နငျ့ခနဲဝငျသှားပွီးမှ ရပျတယျ။
ကိုကွီးက တငျတငျ့လညျတိုငျကို နမျးတော့ တငျတငျ အရမျးဖကျထားမိတယျ၊ မကျြရညျတှတေောငျဝဲတယျ နာနတော မပြောကျသေးဘူး… “ ကလေးက အပြိုမှေးခံနလေို့ ဆကျလိုးရငျ မနာတော့ဘူးသိလား၊ ကောငျးပဲကောငျးတော့မှာ “ “ ဟငျ ဒါဆို သမီးအပြိုမှေး ပေါကျသှားတာလား ” ကိုကွီးက ဘာမှပွနျမပွောပဲ တငျတငျ့ စောကျပတျကလေးကို ဆကျလိုးနတေယျ၊ ဖွညျးဖွညျးလေး လိုးပေးနတေော့ တငျတငျ့ စောကျပတျထဲက ပွနျရှလာရော စောကျပတျထဲ ဝငျဝငျလာတဲ့ အရသာကို တငျတငျ သိလာ တယျ။ မအေးမိကို လိုးသလိုမြိုး အလိုးခံခငျြလာတယျ။ မအေးမိလို ကိုကွီးအပျေါကနေ လီးကွီးကို တကျဆောငျ့လိုးရရငျ ဘယျလိုမြားနမေလဲ၊ တငျတငျ ဖီးလျခံနတေုနျး၊ ကိုကွီး လိုးတာ အရှိနျမွငျ့လာတယျ၊ စောကျဖုတျထဲကို တိုးတိုးလာပွနျပွီ၊ လိုးပစေ့ေ လိုးပစေ့ေ တငျတငျ ပေါငျကားပွီး၊ လိုးတာကို ဖငျပါ ကော့ပေးလိုကျတယျ “ အို ကလေးရယျ…ကောငျးလိုကျတာ အပေးကောငျးလိုကျတာကှယျ ” ပွောရငျး လီးကလဲ ဆကျတိုကျလိုးလိုးထညျ့တော့ နောကျဆုံး ကိုကွီးဆီးခုံနဲ့ တငျတငျ့ဆီးခုံ ကပျမိပွီ။
တငျတငျ့ စောကျပတျထဲ ကိုကွီး လီးမဲကွီး အကုနျဝငျပွီပေါ့ ကိုကွီးရယျ လိုးပါတော့ လိုးပေးပါတော့ပဲ တငျတငျပွောပွဈလိုကျခငျြတယျ။ တငျတငျ့ စောကျပတျလေးကလဲ ကိုကွီးလိုးတာ ကွိုကျလှနျးလို့ လီးခြောငျကွီးကို ပွနျပွနျညဈပေးမိတယျ။ လီးကွီး တိုးတိုးပွီး ဝငျလာတာကို တငျတငျ ပိုပွီးလိုခငျြနမေိပါပွီ စောကျပတျကလေးကလဲတောငျ့နပွေီ။ “ ကလေး သောကျဖုတျကလေးက လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ စီးပွီးကပျြနေ တာပဲ ” “ အဲလိုဆို လိုးလကေိုကွီး စိတျကွိုကျလိုးတော့ သမီးကိုလဲ မအေးမိ လိုလိုး သမီးမနာတော့ဘူး ဟငျ့ဟငျ့ အောကျကယားနပွေီ လုပျပေး အရမျးလုပျပေး ” တငျတငျ စိတျထဲရှိတာတှေ အျောပလိုကျတယျ၊ ရငျထဲမှာ အောကားထဲကလိုရော မအေးမိလိုရော လီးမဲကွီးနဲ့ အားရပါးရ အျောအျောပွီး အလိုးခံခငျြနမေိပွီ။ ကိုကွီးကလဲ ကိုယျကိုမတျလိုကျပွီး၊ တငျတငျ ခွထေောကျတှကေို ကိုငျမွှောကျတယျ။ ခွနှေဈခြောငျးကားပွီး လိုးတာအရမျးပဲ အငျ့ဟာ အငျ့ဟာ ဆိုပွီး အမွနျကွီးလိုးတယျ၊ စောကျပတျထဲ လီးကွီး စကျတပျလိုးတာ ကွနတောပဲကှယျ…
“ အ အအား လိုးလိုး ကိုကွီးလိုး အရမျးကောငျးတယျ စောကျပတျထဲက အရမျးကောငျးတယျ အီး အိုး အရမျးလိုးပါ အရမျးလိုး ကိုကွီး….” တငျတငျ ကိုကွီးရဲ့အဆကျမပွတျ အရမျးလိုးနတေဲ့ လီးကွောငျ့ အရတှေလေဲ ထှကျကုနျပါပွီ။ တဖုနျးဖုနျးနဲ့ ဆကျတိုကျလိုးနရေငျးကနေ တောငျ့တငျးတဲ့ စောကျခေါငျးတဈခုလုံး စောကျရညျတှေ ထှကျကုနျတာ စောကျရညျကုနျလို့ညဈထုတျတုနျးမှာပဲ ကိုကွီးတဈယောကျ “ အ အား ကလေး ကလေး ” ဆိုတဲ့ အျောသံနဲ့ စောကျပတျထဲ လီးကွီး အရမျးဝငျပွီး၊ နှေးကနဲ နှေးကနဲ ဖွဈလာတယျ။ စောကျပတျထဲ ကောငျးလိုကျတာ စောကျပတျကို လေးငါးခါလောကျ အရမျးလိုးပွီး၊ “ ကလေး ကိုကွီး ပွီးပွီတဲ့ ” “ သမီးလဲ ပွီးပါပွီ ကိုကွီးရယျ….” ပွီးပါပွီ
…တိုက်ခန်း တံခါးဝကိုရောက်တော့ ဖွင့်လျှက်မို့ ကြည့်လိုက်သည်။ မိန်းမ ဖိနပ်တစ်ရံ တွေ့တာနဲ့ ဧည့်သည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတယ်။ ဝင်လိုက်တော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှလဲ မတွေ့ရ နောက် ကိုသိန်းအောင် အခန်းက အသံကြားနေရသည်။ အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ပုံမှန်ထက်တော့ပိုသည်။ သုံးထပ်သားအခန်းဖွဲ့မို့ ကြားလိုက်ရသသည်။ “ နင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ဒါတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူး။ ငါအရင်း ပြန်ထည့်ရမှာပါ သိန်းအောင်ရယ် ငါတစ်ကယ် ဒုက္ခရောက်နေပြီ ငါသဘက်ခါ မပေးနိုင်ရင် တရားစွဲတော့မှာ လုပ်ပါဟယ် နင်ငါ့ကို ဆယ်သိန်းပဲချေးရမှာ နင့်ဆီမှာ အစိတ်တောင် ကျန်နေသေးတာကို… ” ဒါဟိုဘက်လမ်းက မအေးမိအသံပဲ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲတောမသိ အသံမပေးတော့ပဲ ဆက်နားထောင်လိုက်မိသည်။ “ အေး..ငါသဘက်ခါ မပေးလို့မရတော့ဘူး သိန်းအောင် နင့်ဆီကပဲ ဆွဲရမှာပဲ သိန်းအောင် နင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဟာ ” “ မိအေး နင်ဘာလုပ်တာလဲ ” သိန်းအောင်ရဲ့တုန်တုန်ရီရီအော်သံကြောင့် တင်တင် အခန်းတံခါးရှိတဲ့အပေါက်ကို တိုးကြည့်လိုက်တော့ မြင်ရတာက တင်တင့်ကို မှင်သက်မိစေသည်။
မအေးမိက ကိုသိန်းအောင် ထိုင်နေတဲ့ ကုတင်ဘေးမှာ ထမိန်ကွင်းလုံးကြီးနဲ့ နောက်ပြီး တီရှပ်ကို ခေါင်းကချွတ်နေသည်။ ပါးစပ်ကလဲ
“ သိန်းအောင် ငါနင့်ဆီက ယူထားတာဟုတ်တယ် အေး.ငါပြန်ဆပ်မှာ အခု ဆက်တိုက်ရှုံးနေလို့ အတိုးမပေးနိုင်တာ ငါ့ကို မတင်စီးနဲ့ ငါဖာသည်လဲမဟုတ်ဘူး..” “ ဟဲ့ အေးမိ နင်သွားနော် သွားတော့…မဟုတ်တာ မလုပ်နဲ့ ငါတို့က သူငယ်ချင်းတွေဟာကို….. ” “ သိန်းအောင် နင် အောင်အောင့်ကိုအားနာနေတာမလား…အောင်အောင်လဲ သေတာ တစ်နှစ်ကျော်လို့ နှစ်နှစ်တောင်ရှိတော့မယ် ” ကိုသိန်းအောင် ဘယ်လောက်တားတား မအေးမိကတော့ ဘရာကိုပါ ချွတ်လိုက်ပြီ၊ အပြင်ကနေ ကြည့်ရတာ ရင်တုန်စရာပဲ၊ တင်တင် လူလာလားလို့ အဝင်တံခါးကိုလဲ ကြည့်ရသေးသည်။ ခန်းစီးကနေ ပြန်ကြည့်တော့ မအေးမိ ကိုသိန်းအောင်ရှေ့မှာ ကိုယ်တုန်းလုန်းကြီးနဲ့ ခါးထောက်ပြီး သူ့စောက်ပတ်ကို ရှေ့တိုးရင်း…….. “အေးမိ နင်ပြန်တော့ဟာ…. ” “ ဘာလဲ.သိန်းအောင် ငါကမုဆိုးမ‚မလို့လား၊ နင့်သူငယ်ချင်း အောင်အောင် ငါနဲ့ယူတာ ကိုးလလောက်ပဲ နေသွားလိုက် ရတာ ဒီမှာတွေ့လား ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။ ”
မအေးမိ သူ့နို့တွေကိုလဲ ကော့ပြ ခြေထောက် တစ်ချောင်းပါ ကားပြနေသေးတယ် “ ဟဲ့ သိန်းအောင် တွေ့လား အပျိုကို ယှဉ်လို့ရသေးတယ်၊ နောက်ပိုင်းကိုလဲ ကြည့်လိုက်ဦး ” မအေးမိ သူ့တင်တွေကို လှည့်ပြပြီး၊ ကိုသိန်းအောင် ရှေ့မှာခါးကို ကုန်းပြနေသည်။ ဟုတ်ပါတယ် မအေးမိ ကိုယ်လုံးက တစ်ကယ်ကို အချိုးအစားကျပါတယ်။ အသားကလဲ လတ်တော့ ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ နို့တွေဆိုတာလဲ သူ့နေရာနဲ့သူ ခါးကလဲသေး ဗိုက်ကလဲ မဖောင်းတော့ အချိုးအစားကျတာပေါ့ တင်သားတွေကလဲ အိုးကောင်းလို့ပြော ရမဲ့ အလုံးကြီးမျိုး တစ်ဖက်ဆီကို လုံးနေတာ လှမှလှ။ မအေးမိ ဖင်ကြီးကုန်းပြတော့ ကိုသိန်းအောင် စိုက်ကြည့်နေတာ တင်တင် အပြင်က မြင်နေရတယ်။ မအေးမိ ကုန်းနေတာကနေ မတ်တပ်ရပ် သိန်းအောင်ဖက်ကိုလှည့်ပြီး “ ဟဲ့ သိန်းအောင် နင်အရင်.မှုတ်မလား ငါအရင်.မှုတ်ပေးရမလား… ”
“ အာ အေးမိ မဖြစ်ဖူး ပြန်ပါတော့ဟာ … ” မအေးမိ ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ကိုသိန်းအောင်ဆီ ငုံလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဆတ်ကနဲ ဖြည်လိုက်ပြီးမှ “ နင်မူလကျီ လုပ်မနေနဲ့ နင့်ဟာနင်ကြည့်ဦး တောင်နေပြီ ” ဟုတ်ပ ကိုသိန်းအောင် ဟာကြီးကို တင်တင်ပါ လှမ်းမြင်နေရသည်။ တင်တင် လီးတောင်နေတာကို အပြင်မှာ အခုမှ စမြင်ဖူးတာ။ မအေးမိ ကိုသိန်းအောင် ပေါင်ကြားကို အတင်းတိုး ဒူးထောက်ပြီး ပုဆိုးကို အောက်က လှန်တင်လိုက်တော့တာပဲ။ကိုသိန်းမောင် ဘာမှလုပ်ချိန်တောင်မရဘူး။ အို…တင်တင် ကြည့်တောင်မကြည့်ရဲတော့ဘူး။ မအေးမိရယ်လေ ကိုသိန်းအောင် လီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်တာဆို တင်တင် ကြည့်ဖူးတဲ့ အောကားထဲကလိုပဲ အခုဟာက ကိုယ်သိနေတဲ့ ကိုသိန်းအောင်နဲ့ မအေးမိ အရှင်လတ်လတ်ကြီး မြင်နေရတာ မအေးမိက လီးကြီးကနေပြီးတော့ ပေါင်ရင်းတွေကို လျှာနဲ့ယက်နေတာ။ ကိုသိန်းမောင် ကုတင်ပေါ် ပက်လက်ကြီး လှန်ချလိုက်တော့ တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို တင်တင် သေချာချောင်းကြည့်မိတယ် ကိုသိန်းမောင် လီးကြီးက မနေ့တစ်နေ့ကမှ ကြည့်မိတဲ့ ကားထဲက ကပ္ပလီ လီးကြီးလိုပါပဲလား၊ မအေးမိ ကိုသိန်းအောင်လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး အောက်ကနေ မော့မော့ပြီး ဥတွေကို ယက်တာများ ကြည့်နေတဲ့ တင်တင် တောင်မေ့ပြီး လျှာကို ကစားမိတယ်။
“ ဟဲ့..သိန်းအောင်.ကောင်းလား…လီးကလဲ.ကြီးလိုက်တာ…သိန်းအောင်ရယ်… ” မအေးမိ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကိုသိန်းအောင် လီးကြီးကို ငုံပေးနေတယ်။ မြင်နေရတာ အသဲယားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ မအေးမိ ပါးစပ်အပြည့် လီးမဲမဲကြီးက တင်တင်လဲ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲ လီးကြီး ငုံထားရသလိုလိုကြီးပဲ။ မအေးမိ လီးကြီးကို ပါစပ်ထဲက ထုတ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက် လုပ်နေတာများ လန့်ဖို့ကောင်းတယ်….အို…..ကိုသိန်းမောင် မအေးမိကို လုပ်ထည့်လိုက်ပြီ မအေးမိ “ အု..အု ” နဲ့ ဖြစ်နေတာ ပါးစပ် မဆန့်တာကြီးကို အတင်းခေါင်းကို ဖိထားတယ်။ အောင်မလေး တင်တင် ရင်တွေခုန်တာ တဒိန်းဒိန်းပဲ…….. “ သိန်းအောင် နင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ အသက်တောင် ရှုလို့မရတော့ ဘူး ငါ့ကို ဖာသည်အောင့်မေ့လို့လား၊ သေသွားတဲ့ ငါ့လင်တစ်ယောက်ပဲ ခံဖူးတာဟဲ့ ”
တင်တင်ကြည့်နေတုန်း မအေးမိ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး အပေါ်ကနေ ချတယ်။ “ သိန်းအောင် နင် နဲနဲပါးပါး နမ်းတာလဲ နို့စို့တာလေး လုပ်ပေးဦးလေဟယ် ငါပဲ အစအဆုံး လုပ်ပေးနေရမှာလား…. ” “ ငါဘယ်လို စရမလဲ စဉ်းစားနေတာ ” “ ဟောတော့ ,..သေပါတော့ သိန်းအောင်ရယ် အဝတ်လေး ဘာလေးချွတ်ဦးလေ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ငါက ဖာသည်မ ကြနေတာပဲ သိန်းအောင် နင်ဘာကြောက်နေတာလဲ ငါက နင့်ကို ယူခိုင်းမှာစိုးလို့လား ဝေးသေး လုံးဝပဲ နင့်အကြွေးတွေလဲ မရှော်ခိုင်းဘူး ” ကိုသိန်းအောင် ကမန်းကတန်း အင်္ကျီချွတ်တယ် နောက်မအေးမိကို သိုင်းဖက်ပြီး မျက်နှာတွေကို နမ်းတော့တာပဲ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းရက်ကနေ ကိုသိန်းအောင် လက်တွေ မအေးမိ နို့တွေကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်တော့ မအေးမိ ခွထိုင်နေရာကနေ ဒူးထောက်ပြီး ဖင်ကိုလှုပ်နေတယ်၊ ကိုသိန်းအောင် လီးကြီးကို စောက်ပတ်နဲ့ ပွတ်နေတာ့ဖြစ်မယ်။
ခဏပဲ ကိုသိန်းအောင် ပက်လက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီး၊ အို မအေးမိ.. မအေးမိတစ်ယောက် ကိုသိန်းအောင် လီးကြီးကိုင်ပြီး၊ သူ့စောက်ပတ်ကို ပွတ်နေတာ၊ အိုး တစ်ကယ် အရသာ ယူနေတာပါလား။ တင်တင် စောက်ပတ် ယားသလိုလို ယွသလိုလိုစလာပြီ။ တင်းတာတော့ တင်းနေတာ စကြည့်နေကတည်းက ခုတော့ စောက်ပတ် ကလိချင်တာနဲ့ နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး တိုက်ခန်းတံခါးကိုပိတ်ရတယ်။ ပြန်လာတော့ လိုက်ကာ ဖြဲကြည့်တာ ဒိန်းဆို ရင်တွေတုန်သွားတယ် မအေးမိက ကိုသိန်းအောင် အပေါ်ကနေ ဘေးလက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီး ခါးကော့ ဖင်က ကုန်းကုန်းနဲ့ ဒူးကထောက်လို့။ အို ..မအေးမိ ကော့ထားတဲ့ ဖင်ဖွေးဖွေး လုံးလုံးကြီးတွေ နောက်တော့ ဖောင်းပြီး ထွက်နေတဲ့ မအေးမိ စောက်ဖုတ်။ အဲ့ဒီမှာ လီးမဲကြီးက တန်းလန်းကြီး၊ အိုး တစ်ကယ့် ပက်ပက်စက်စက်မြင်ကွင်းပဲ တင်တင် တံတွေး မျိူချလိုက်ပြီ၊ လက်က စောက်ပတ်ကို စမ်းနေမိတယ် အို..ငါတောင်စိုနေပြီ၊ မအေးမိ ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။ မြင်နေရတာ လီးက ကြောက်စရာကြီး၊ မအေးမိ စောက်ပတ်က ဝိုင်းနေတာပဲ။ လီးက မီးချောင်းလုံးလောက်ကြီး….အမလေးနော်…မအေးမိ လီးတန်းလန်းကြီးကို လှုပ်လှုပ်ထည့်နေတာဖြစ်မယ်။ ဖင်က ကြွလိုက်ဖိလိုက်နဲ့ နောက်ကို ဖင်တွန်းရင် စောက်ဖုတ် နှစ်ခြမ်းကြား လီးဝင်နေတာကြီးက အသဲယားစရာကြီး၊ တင်တင်စမ်းနေရင်း ပွတ်နေရင်းက စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ခလယ် လက်ညှိုး နှစ်ချောင်းပူးပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှ ကိုယ်လဲနေသာသလိုလို။
“ သိန်းအောင်ရယ်.. နင်ဟာကြီးက မတရားကျပ်နေပြီ နင်လူမှဟုတ်ရဲ့လား နင့်လီးကြီးက မြင်းလီးကြီးကျနေတာပဲ .တင်းကျပ်နေတာ အ အ အ အား…. ကျွတ်ကျွတ် နာလိုက်တာဟယ်….., ” မအေးမိ ဖင်ကို ဖိလိုက်ကြွလိုက်နဲ့ ဆက်တိုက်လုပ်တော့မှ ကိုသိန်းအောင် လီးမဲမဲကြီးက စောက်ပတ် အဝကနေ တိုးတိုးပြီး ဝင်သွားတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုသိန်းအောင် လီးကြီး အဆုံးထိ စောက်ပတ်ထဲ ရောက်မှ မအေးမိ ရပ်တယ်။ တင်တင်လဲ စောက်ပတ်ထဲ လက်တွေ အဆုံးရောက်နေပြီ။ ကိုယ့်ဟာကိုတောင် ဘယ်လိုထည့်လဲ မသိဘူး။ လက်နှစ်ချောင်းလုံး စိုနေပြီ အရင်းကို ရောက်နေပြီလေ။ တင်တင်လဲ အဲ့အတိုင်းထည့်ထားပြီး ငေးကြည့်နေမိတယ်။ မအေးမိလိုသာဆို… အမလေး…..ကျောချမ်းစရာပါလားနော်….မျက်စိထဲ ကိုယ့်စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုသိန်းအောင် မီးချောင်းဆိုဒ် လီးမဲကြီး …အမလေး… ကိုယ်သာဆို ဖြစ်ပါ့မလားနော် မအေးမိလိုသာ ထည့်ကြည့်ရရင် အင်း…တင်တင် စိတ်ထဲ ကိုသိန်းအောင် လီးဝင်တာ ဖီလ်းယူကြည့်တော့ ကောင်းသလိုလို နှိုက်နေရင်းက လက်မနဲ့ပါ အစိကိုပွတ်နေမိပြီ။လီးကြီးနဲ့ဆို ဘယ်လိုများလဲ…
“ သိန်းအောင်..နင်တော့တော်တော်ထန်နေပြီနော် နင့်ဟာက ငါ့မှာ အသက်တောင် မနဲရှုရတယ်၊ စောက်ပတ်ထဲ ပြည့်တာတင် မဟုတ်ဘူး။ သားအိမ်ခေါင်းပါ ထောက်နေပြီ …” “ အေမိကလဲဟာ ဒီလိုပဲမဟုတ်ဖူးလား” ”ဘာဒီလိုပဲလဲ…ငါစောက်ပတ် ဒီလောက်ကျပ်တာ နင်စားပီး နားမလည် သလိုမလုပ်နဲ့ ငါ့မှာ နင့်ဟာကြီး ထည့်ရတာ သေတော့မယ်… ” “ အေးပါ..အေးပါ…အေးမိရာ ငါနို့စို့ပေးမယ်နော်.. ” “ အေး…အဲ့လိုလဲ အလိုက်သိဦး မအေးမိ တံတောင်လေး ထောက်ပေးတော့ ကိုသိန်းအောင်က နို့စို့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မအေးမိ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်ပြီး လက်က နို့ကိုနယ်တာ။ နှုတ်ခမ်းတွေ စုပ်နေရင်းက ဟော မအေးမိလှုပ်နေပြီ၊ ဘယ်လိုများ လုပ် လဲမသိဘူး။ ဖင်လုံးပဲ လှုပ်တာ၊ လီးကိုလိုးပေးနေတာ၊ အပေါ်က နှုတ်ခမ်းပဲ စုပ်တာ၊ ဖင်ကနေပြီး ခါးနဲ့လိုးပေးနေတာဖြစ်မယ်။ အို အိုး တကယ်ပါပဲ ကြွလိုက်ရင် လီးက စောက်ပတ်ကနေ ထွက်လာလိုက် မအေးမိ ဖင်နှစ်ခြမ်း စိသွားလိုက် လီးပြန်ဝင်တော့ စောက်ပတ်ပြဲပြဲကြီး နောက်ကို ထွက်နေတာ၊ အို တော်တော်ကောင်းမှာပဲ၊ တင်တင် စောက်ပတ်ကလေးထဲကို လက်နှစ်ချောင်း ပူးထည့်ရင်း သုံးချောင်းထည့်ရင် ကောင်းမလား တွေးမိပါတယ်။ သုံးချောင်းဆို ပြဲသွားရင်ဒုက္ခ ဟောဟော မအေးမိ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဆောင့်နေပါလား။
“ သိန်းအောင်ရယ်…ကြီးလိုက်တဲ့ လီးဟယ်.,. ” “ အင့် အင့် ကောင်းလား ရော့ရော့ ကောင်းလား အီး အား ” သစ်ငုတ်ထိုင်ဆောင့်ပုံလေး၊ မအေးမိ ဆောင့်နေတာ တင်တင် တွေ့တာတော့ ကြက်ဖ ခွပ်သလို ဆောင့်နေတာ၊ စောက်ပတ်က လီးကို အပေါ်က စွပ်ပြီးထည့်နေတာပဲ… “ အေးမိ လုပ် လုပ် လုပ်ဟာ မြန့်မြန်….” “ သိန်းအောင် နင်ကောင်းနေပြီလား..နေဦးလေ မပြီးနဲ့ဦး ငါလဲ တူတူကောင်းမှာပေါ့ ဟင့် ဟင့် နင့်လီးကြီးနဲ့ ဟင့်ဟင့် မပြီးနဲ့ဦး…” မအေးမိ ပြောပြီး မဆောင့်တော့ဘူး ကိုသိန်းအောက်ပေါ်မှာ ထပ်ပြီးအိပ်နေတယ်။ ကိုသိန်းအောင် အောက်ကနေ ကော့ကော့လိုးနေတာ အားမရဘူး။ “ အေးမိ နင်ကလဲဟာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. ” “ သိန်းအောင်ရယ်..ငါလဲ ပြီချင်တာပေါ့ ငါ.အလိုးမခံရတာ နင့်သူငယ်ချင်း သေကတည်းက ငါ့ကိုလဲစာနာပါဦး။ ” “ အင်း ” မအေးမိက ဒီလိုတော့လဲ သနားစရာပဲသူ့ယောင်္ကျားကလဲ စောစောစီးစီး သေရှာတယ်။ အေးလေ တင်တင်ဆို အလိုးတောင် ခံဘူးတာ မဟုတ်ဘူး။ အယ် ကိုသိန်းအောင် မတ်တပ်ရပ်ပြီ၊ တင်တင် မျက်လုံးဝိုင်းသွားတယ်။ ထိုင်ပြီး မအေးမိ ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းထိုးနေပြီ။
ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပါလိမ့် မအေးမိလဲ ခြေထောက်တွေ ကားလို့ “ အို..အို..သိန်းအောင်ရယ် ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အရမ်းမစုပ်ရဘူး နာတယ် ” “ ဟင် ,.ဘာစုပ်တာလဲ တင်တင် စဉ်းစားတော့၊ အင်း…မအေးမိ အစိကိုများ စုပ်တာလား တင်တင် အသဲတွေ ယားတက်လာတယ် ခေါင်းကြီးက ကွယ်နေတော့ သေချာမမြင်ရဘူး။ “ အို အိုး ကောင်းလိုက်တာ အား အား နင်.စောက်ဖုတ်.မှုတ်ဖူးလား..သိန်းအောင် ” ကိုသိန်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်နေလို့ မအေးမိ ဘာတွေမေးနေတာ တင်တင်စဉ်းစားမရဘူး။ ကိုသိန်းအောင်ကတော့ ခေါင်းကိုမဖော်ဘူး။ မအေးမိ မွေ့ယူကြီးကို တဖုန်းဖုန်း ရိုက်နေတယ်၊ တော်တော်ဖီးလ်တွေ့နေတယ် ထင်တယ်။ အင်း ငါ့ဟာလေး ကိုသိန်းအောင်သာ အဲ့လိုလုပ်ပေးရင် တွေးရင်း၊ တင်တင် ရင်ထဲ တင်းကျပ်နေတယ်။ စိတ်ကူးထဲ မအေးမိ နေရာမှာ ခဏဝင်ကြည့်မိသည်။ အို…စောက်ပတ် တင်းလာပြန်ပြီ ညှစ်နေမိပြန်ပြီ အဲ့လို အယက်ခံဘူးချင်လိုက်တာ၊ “ အ အ အို အိုး မလုပ်ပါနဲ့ အဲ့လို မလုပ်ပါနဲ့ အား အီး အား စောက်ဖုတ်ပဲ လုပ်ပါ အား အဟင့် ဟင့် သိန်းအောင် ရယ် စောက်ဖုတ်ပဲ လုပ်ပါ ”
ဟောတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာပါလိမ့်။ အို..ကိုသိန်းအောင်.မအေးမိ.ဖင်လုံးတွေကိုင်ပြီး.အောက်က.ယက်နေတာပဲ၊ ဒါဒါ ဒါဆို ဟိုအပေါက်ပဲ စောက်ပတ်က အပေါ်မှာပဲ အို ကိုသိန်းအောင်ကြီး မအေးမိ ဖင်ပေါက်ကို ယက်နေတာပါလား၊
“ အို….သိန်းအောင် တော်ပါတော့…ငါ့ကို လိုးပေးပါတော့..အို..အိုး..ငါ့ကို.လိုးပေးပါတော့..ငါ့ကို.မညှင်းဆဲပါနဲတော့။ မအေးမိ တော်တော် ဖီးလ်တက်နေပြီထင်တယ်။ အင်းလေ…တင်တင် တောင် တော်တော် ဟုတ်နေပြီ။ “ အား.အား.အမလေး.အ…အ.သေပါပြီ သနားပါဦး..ငါ့ကိုသနားပါဦး..အမလေး အရမ်းပဲဟယ် အောင့်အောင့်သွားတာပဲ ဖြေးဖြေးနော်..သိန်းအောင်.ဖြေးဖြေးလုပ်.နင်စားတတ်ရင်.တစ်ညလုံး.စားလို့ရတယ် ၊မလောပါနဲ့ဟာ.ဖီးလ်နဲ့.လိုးစမ်းပါ…ဒါဆို.နင်မပြန်နဲ့နော်.နေမှာလားပြော ” “ အေး.မပြန်ဘူး.နင်ပဲ.လိုးနိုင်မလား.ငါပဲခံနိုင်မလား.ဘယ်သူ ဆေးရုံရောက်
မလဲ.မသိဘူး ” ဟောတော့ တင်တင်ကျောချမ်းသွားပြီ။ မဖြစ်ဖူး ကိုယ်ကပြန်မှဖြစ်မှာ ခုတောင်တော်တော်ကြာနေပြီ။ အမေ လိုက်လာမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်။ တင်တင် ထပ်ကြည့်ချင်ပေမဲ့ မဖြစ်တော့ပါဘူးလေ… “ အ အ ကောင်း…ကောင်း…အင်း အင်း…အဲ့တိုင်း…အဲ့အတိုင်းပဲ လိုးပေး အဲ့တိုင်း လိုးပေး…. ” ဟော လိုးနေပြီ ကြည့်လို့ကလဲ ကောင်းလိုက်တာ။ မအေးမိ ပေါင်လေးကားလို့ ကိုသိန်းအောင်ကလဲ ကုတင်ပေါ် လက်ထောက်ပြီး အောက်ကနေ တစ်ချက်ခြင်း လိုးနေတာ။ “ အ..အ..ကောင်းလိုက်တာ…ကောင်းလိုက်တာ နင်ရော နင်ဘယ်လိုလဲ …. ငါ့စောက်ပတ် ကောင်းရဲ့လား… ဟဲ့ အီး အီး ….ဟဲ့.ငါ့စောက်ပတ် ကောင်းရဲ့လား ပြောလေ ပြောလေ ပြောလိုး ပြောလိုး.အ..အ..လိုးကောင်းလား ” တင်တင် စိတ်ကိုလျှော့ နောက်ဆုံး အဝ ကြည့်ပြီး၊ အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ် မျက်စိထဲမှာ မအေးမိကို ကိုသိန်းအောင် လိုးနေတာပဲ တဝဲလည်လည် မြင်နေတယ်။
သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ လိုးကြမလဲ၊ ဘယ်လိုတွေရော လိုးဦးမှာလဲ၊ အောကားထဲကလို ပုံစံပေါင်းစုံ လိုးမှာလား၊ ဟူး….တင်တင် စောက်ပတ် တင်းတာ ရွတာကလဲမပျောက်၊ ကိုင်မိပြန်ပီ၊ ဟင်း ငါ့ကိုများ ကိုသိန်းအောင် လီးမဲကြီးဆို အို..တင်တင် တော်တော်နဲ့အိပ်မရ ဟိုဘက်လှည့် ဒီဘက်လှည့်နှင့်စိတ်က ကိုသိန်းအောင်နဲ့ မအေးမိကိုသာ မြင်နေမိသည်။ လက်ကလဲ စောက်ပတ်ကို ကိုင်ရင်း ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်ထားတော့ စောက်ရည်တွေ ဟိုကပ်ဒီကပ်နဲ့ မနက်တော့ ထမိန်လျှော်ဦးမှ ဒီလိုနဲ့သန်းခေါင်ကျော်မှ အိပ်ပျော်သည်။ တင်တင် ရောက်သွားတော့ ဦးလေးကျော် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတာတွေ့တယ်၊ စားပွဲပေါ်မှာ ပုလင်းတွေ ခွက်တွေ ဟင်းပုဂံတွေနှင့် “ ဟဲ့ တင်တင်ပါလား၊ ငါ့တူမကြီး ဘာလာလုပ်တာလဲ၊ မတွေ့တာတောင်ကြာလို့ အပျိုကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီပဲ ……” “ ဦးလေးကျော်ရော သင်္ဘောကနေ ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်တာလဲ…. သမီးတို့ သိတောင်မသိဘူး..ဘာလဲ.. လက်ဆောင် ပေးရမှာစိုးလို့လား..” “ ဟေး..ဟေး..လုပ်ပြီ..ပါပါ့ဗျာ….ဒီမရောက်ခင်.စင်္ကာပူ ဝင်တော့ တီရှပ် တွေပါတယ်.ဦးလေး တစ်နေ့ကမှရောက်တာ ဒီနေ့မှ လမ်းထွက်ဖြစ်တာ၊ အဲ့တာ မောင်သိန်းအောင်အတွက်ဆိုပြီး ဝီစကီလေး လာပေးတာ ”
“ ဦးလေးကလဲ ကိုကြီးကမှ မသောက်တတ်တာ ဦးလေးကျော် သောက် ချင်တိုင်း ” “ အဟေး.ဟေး.သူလဲ ဦးလေးကျော်နဲ့မှ သောက်ဖြစ်တာပါ၊ သမီး သူလာတာစောင့်လေ ဦးလေး ကိုတင့်ဆန်းတို့ဘက် သွားနှုတ်ဆက်လိုက်ဦးမယ် ..ဟော ပြန်လာပြီ မောင်သိန်းအောင်ရေ ဦးလေး …ကိုတင်ဆန်းတို့ဘက် လှည့်လိုက်ဦးမယ် သိတယ်မလား စိတ်ဆိုးနေဦးမယ် ” ဦးလေးကျော် ထွက်သွားတော့ ကိုသိန်းအောင် တံခါးထိ နှုတ်ဆက်ပြီး၊ ချက်ထိုးတယ် တင်တင် နဲနဲတော့ ထူးဆန်းသွားတယ်။ ကိုသိန်းအောင် ဘာမှမပြောပါပဲ စားပွဲပေါ်က အရက်ခွက်ကို ကောက်မော့တယ်၊ တင်တင်ကို စိုက်ကြည့်ပြီးမှ ကပ်လာပြီး…ညီမလေး နင်မနေ့က ဘာတွေမြင်ထားလဲ…အစမရှိအဆုံးမရှိ မေးတော့ တင်တင် လန့်သွားတယ်။ ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့နဲ့… “ဟို..ဟို..တင်တင် ဘာမှမမြင်ပါဘူး ကိုကြီး၊ တင်တက် ဘာမှမမြင်ပါဘူး … ” ကိုသိန်းအောင် လက်က ဖျတ်ခနဲဆို တင်တင်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် သိမ်းဖက်ပြီး၊ “ တင်တင် ညီမလေး ကိုကြီး ဒေါ်လေးနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ် မနေ့က ဒီမှာ ထိုင်စောင့်နေတာတဲ့ ….မညာနဲ့တော့…” သွားပြီ…တင်တင် မနေ့က အမေ့ကို ကိုသိန်းအောင်ကို ထိုင်စောင့်နေရတာကြာလို့ ပြန်လာတာလို့ ပြောခဲ့တာ။ ဒုက္ခပဲ တင်တင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ “ဟို..ဟို..ကိုကြီး တင်တင် ဘာမှမမြင်ပါဘူး ကိုကြီးရယ် တစ်ကယ်ပါ တစ်ကယ်ပါနော်……” ကိုကြီးက တင်တင်ပါးကို ကပ်လိုက်ပြီးမှ… “ ညီမလေး အေးမိပြန်မှ ပြန် တာလား…” “ မဟုတ်ပါဘူး အစောကြီးပြန်တာပါ…..,” “ ဘယ်ချိန်လဲ အေးမိ ပြီးမှလား ” “ အို မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး တင်တင် မသိဘူး…” ကိုကြီး တင်တင့်ကို တင်းနေအောင် ထပ်ဖက်လိုက်ပြီး၊ တင်တင့်ဖင်ကြားကို လက်နဲထိုးပြီး၊ ဖင်ပေါက်တည့်တည့်ကိုဖိတာ မလွတ်တော့ပဲ “ ဒါဆို အေးမိ‚ဖင်ကို ထည့်တုန်းကလား” ပြောရင်း တင်တင် ဖင်ဝလေးကို လက်နဲ့ကလိတော့တာ တင်တင် လန့်သွားတယ်၊ “ အို ဟုတ်ဖူး ဟူတ်ဖူး တင်တင် မသိဘူး…” “ ညီမလေး မညာနဲ့နော် ကိုကြီးသိတယ်…..ဟိုအပေါက်မှာ ရပ်နေတာမလား၊ တင်တင့်ခေါင်းစီးချိတ်ကလေးတစ်ခု ကျန်ခဲ့တယ်…” “ အို သိဘူး သိဘူး ကိုကြီး တင်တင်ကို လွှတ်ပါ…တောင်းပန်ပါတယ် ကိုကြီးရယ်…”
“ တင်တင် ကြည့်ကိုကြည်နေတာပါ ဒါဆို ဖင်လိုးတာမဟုတ်ရင် စောက်ပတ်လိုးတာရော…..” ကိုကြီးက အဲ့လိုမေးပြီး ရှေ့ကနေ တင်တင် ထမိန်ကြား လက်ထိုးပြီး ပင်တီအောက်ကို နှိုက်တယ်၊ “ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း တင်တင် မတွေ့ဘူး၊ မကြည့်ပါဘူး ..” တင်တင် ဘယ်လိုငြင်းငြင်း ကိုကြီးလက်က စောက်ပတ်ကိုပွတ်ပြီး နှိုက်နေပြီ၊ ပြီးတော့ တင်တင့်ကို အတင်းဖက်ပြီး၊ ကိုကြီးအခန်းကို သွားတော့ သွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ပြီ၊ ကိုကြီးက တင်တင်ကို ကုတင်ပေါ် အတင်းတွန်းချတယ်၊ ကုတင်ပေါ် လဲသွားရော အပေါ်ကနေ တစ်ခါထဲလှုပ်မရအောင် ဖိထားတာ တင်တင် အရမ်းကြောက်နေမိပြီ၊ ကိုကြီး ကုတင်ပေါ်ကနေ အော်ရင်ရော ဘယ်သူလာမှာလဲ အခန်းတံခါးက ပိတ်ထားတဲ့ဟာ၊ ကိုကြီး ဖိထားတာကနေ တီရှပ်ကို စွဲလှန်လိုက်တော့ ဘရာတွေပေါ်ကုန်ပြီ ဘရာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲတင်ပြီးတော့ တင်တင် နို့သေးသေးလေးတွေကို တအားစုပ်တော့ တင်တင် အသက်ရှုမှားပြီ..၊ “ ကိုကြီးရယ် မလုပ်ပါနဲ့နော် တင်တင် တောင်းပန်ပါတယ် ကိုကြီးတို့ဟာ တင်တင် ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး ” “ အေး အဲ့ဒါဆို မှန်မှန်ပြော ငါအေးမိနို့စို့တာ မြင်တယ်မလား ဟုတ်တယ်မလား နင်မြင်တယ် နင်လဲချွတ် ငါစို့ပြမယ်..”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ တီရှပ်ကို အတင်းလှန်ချွတ်တော့ တင်တင် မတတ်နိုင်တော့ လက်တွေဆန့်ပြီး ကျောကော့ပေးလိုက်ရသည်။ တီရှပ်ချွတ်ပြီး ကျောမချခင် နောက်ကနေ ဘရာချိတ်ကို ဖြုတ်နေပြီ၊ အပေါ်ပိုင်း ဟောင်းလောင်းလေး ဖြစ်သွားတော့ ကမန်းကတန်း လက်နဲ့ အုပ်ထားပေမဲ့ ပေါ်နေတဲ့ နေရာအစုံကို ကိုကြီးကလျှောက်နမ်းနေတော့ တင်တင် ဘယ်နေရာ ကာရမှန်းမသိတော့ နို့ကိုအုပ်ထားပြီး ဘယ်ညာလူးနေရသည်။ တင်တင် ရုန်းနေရင်း ကိုကြီးက အောက်ကထမိန်ကို လှန်တင်နေသည်။ တင်တင် အပေါ်တက်လာတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချတော့ နို့ကို စို့မိသွားပြီ။ လက်ကလဲ ပြန်တင်လို့မရတော့ ကိုကြီးက လက်ကို ဖိထား လေပြီ။ ညာဘက် နို့အုံတစ်ဖက်က ကိုကြီး ငုံထားတော့ ထူးခြားတဲ့ အရသာ ကို တင်တင် စသိရပြီ။ နွေးနေသလိုလို ပြီးတော့ လျှာနဲ့ထိုးနေတာ၊ ကိုကြီး ခေါင်းကို လက်နဲ့တွန်းဖယ်ဖို့ လုပ်လိုက်တာနဲ့ တင်တင့် နို့သီးခေါင်းလေးကို မလွတ်တမ်း စုပ်ယူထားတယ် နောက်လက်တစ်ဖက်ကလဲ နို့ကိုကိုင်နေပြန်ပြီ။ တင်တင့် နို့တွေကို ကိုကြီး အပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီ။
တင်တင် ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ နို့စို့တော့ တင်တင်နို့ တင်းတင်းလေးမှ နွေးကနဲ နွေးကနဲ လိုနဲ့ တင်တင် အသက်ရှုမှားပြီး ရင်ဘတ်က မငြိမ်တော့ဘူး။ အလိုလို ကော့နေသလိုပဲ အော်ချင်သလိုလိုကြီး၊ ကိုင်မိကိုင်ရာ ကိုကြီးခေါင်းကို ကိုင်နေမိသည်။ တင်တင် နို့စို့တဲ့ အရသာခံတုန်း အောက်က တင်တင့် ဆီးခုံခွကြားထဲ လာထောက်နေသည်။ အို..ကိုကြီး ဘယ်ချိန်က တင်တင် ပေါင်ကြားထဲ ရောက်နေတာလဲ…တင်တင် ပေါင်ကလေးတွေကလဲ ကားပေးသလိုဖြစ်နေပြီ.. အို..တင်တင် ထမိန်လဲ ခါးမှာရောက်နေပြီ၊ အို..ရှက်လိုက်တာ …. ပင်တီခွကို ဘေးဖယ်နေပြီ လာထိနေပြီ “ အဟင့် အင်း ဟင့် ကိုကြီး ဟင့်အင်း ” စောက်ပတ်ကလေးထဲ တိုးဝင်လာတာ ကိုကြီးလက်ဖြစ်မည်။ နို့စို့နေတာ ခဏရပ်လိုက်ပြီး၊ “ အေးမိကို ဘာဂျာမှုတ်တာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ညီမလေး ကိုကြီးကို ပြောပါဦး… ” ” အင့်အင်း သိဘူး တင်တင် သိဘူး၊ ဟင့် ဟင့် အို ကိုကြီး ” အောက်ကိုလျှောချပြီး ပင်တီခွကြားကိုဖယ်ပြီး၊ တင်တင့် စောက်ပတ်ကို လုပ်နေပြီ..
“ ကိုကြီး…ကိုကြီး..မလုပ်ပါနဲ့ တင်တင် မသိဘူး… မသိဘူး အ အအားအား ဟင်းဟင်း လုပ်ပါနဲ့ ကိုကြီးရယ် ” ကိုကြီးလက်တွေက ပင်တီကို ဆွဲရင်းဆွဲရင်း ပင်တီက ဖင်ကနေကျွတ်ပြီး ပေါင်လည်ထိ ရောက်သွားပြီ၊ ခေါင်းက ပင်တီအောက်က ဝင်လာပြီး၊ တင်တင် စောက်ပတ်ကို ကြည့်နေတယ် အို..တင်တင် ရှက်လိုက်တာ လက်နဲ့ လှမ်းအုပ်ထားမိတယ်၊ ညီမလေး စောက်ပတ် ကလေးက ချစ်စရာလေး အမွှေးတွေကလဲ ပါးပါးလေးနဲ့ “ အို…ကိုကြီး ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ ” “ လူသာငယ်ပေမဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက ချစ်စရာကြီးကွာ အကြီးကြီးပဲ၊ ကိုကြီး ယက်ချင်လိုက်တာ လက်ဖယ်ပေးနော်.,..”
“ဟင့်အင်း ကိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့ တင်တင်ကြောက်လို့ မလုပ်ပါနဲ့ ” တင်တင်ပြောနေပေမဲ့၊ ကိုကြီးက တင်တင်ဖုံးထားတဲ့ လက်တွေကို အတင်းဆွဲဖယ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကိုကြီးလေ ကိုကြီး တင်တင် ဖုံးထားတဲ့ လက်တွေကို ယက်ပေးနေတယ်။ တင်တင်မျက်လုံးပဲ ပိတ်ထားတော့တယ်။ “ အား ကိုကြီး မကောင်းဘူး အီး အီး အူး အို အိုး ” တင်တင် အုပ်ထားတဲ့ လက်တွေကို အဖျားကနေ တွန်းဖယ်ပြီး၊ ပေါ်လာတဲ့ဖင်ဝလေးကို သူ့လျှာနဲ့ယက်တာ တင်တင် မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ အကုန်လွတ်လိုက်ပြီး၊ ကိုကြီးခေါင်းပဲ ကိုင်နေမိတယ်။ တင်တင် လက်က ဖုံးထားတာ လွတ်တာနဲ့ စောက်ပတ်ကို စုပ်တယ် ပြီးတော့ အထဲကိုလဲ လျှာကြီးနဲ့ ထိုးထိုးပေးတာ တင်တင် သေတော့မှာပဲ…. စောက်ပတ်လေ စောက်ပတ်ကလဲအတင်းဖြစ်နေတာ အဲ့လျှာကိုပဲ ကော့ပေးနေမိတယ်။ ဟော တက်လာပြန်ပြီ အစေ အစေ့ အိုး ဘယ်လိုလဲ ကိုကြီးရယ်…သူစောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ဖြဲထားပြီး ဖြဲထားပြီး…အိုအကုန် အကုန်ပဲ စောက်ပတ် တစ်ခုလုံး မကျန်တော့ပါဘူး…တင်တက် မရှက်နိုင်တော့ဘူး ကော့ပေးမိနေပြီ တင်တင် စောက်ပတ်လေးကို အယက်ခံရတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိပါပြီ ကိုကြီးရယ်…ယက်ပါတော့ အားရပါးရသာ ယက်ပေးပါတော့။ တင်တင့် စောက်ပတ်ကလဲ ယားလှပြီ… “ အီး ဟင်းဟင်း ကိုကြီးရယ် အတင်းပဲ အို..ဟင့် ဟင့်… ” “ တင်တင် ကလေး အရမ်းကောင်းလာပြီလား၊ စောက်ရည်လေးတွေ စိမ့်နေလိုက်တာ ကိုကြီးယက်လိုက်မယ် ” “ အို ကိုကြီးရယ်..” တင်တင့် စောပ်ပတ်ကိုဖြဲပြီး အတွင်းထဲကို လျှာနဲ့လုပ်နေပြန်ပြီ။ တင်တင် တအားကို အရည်ရွှဲနေပြီ။ ကိုကြီး စောက်ပတ်ကို မွှေနေတာ ရပ်လိုက်ပြီး၊ “ တင်တင် ကလေး ကိုကြီးတို့ ချစ်ရအောင်နော်… ” “ အို ကိုကြီး တင်တင်
ကြောက်တယ်….” “ အို ကလေးကလဲ ဖြေးဖြေးလေးပဲချစ်မှာ မကြောက်နဲ့နော်…” ကိုကြီး ခေါင်းကိုမော့ပြီး ထတော့ ပင်တီလေးကိုပါ တစ်ခါထဲ ချွတ် ယူသွားသည်။ ပြီးတော့ ပုဆိုးကို ချွတ်နေတာကြည်ပြီး တင်တင် ရင်တွေ တုန်နေပြီ ငြင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ တင်တင် သဘောပေါကိလိုက်ပြီ။
တင်တင့်ပေါင်ကြားမှာ ကိုကြီး ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တော့ အို…လီးကြီးကို သေချာမြင်နေရတယ် မအေးမိကို လိုးတုန်းက ဒီလောက်မသဲကွဲဘူး။ ခုတော့ ဒါကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုလိုးတော့မယ် တင်တင် ဖင်စအိုလေး ကျုံ့ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ကိုကြီးက သူ့လီးကို တံတွေးတွေနဲ့ နယ်နေတာ ကြည်ပြီး တင်တင် ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ ပေါင်တွေကို ကားပေးမိတယ်၊ စောက်ပတ်ဝ ပွင့်နေတော့ ကိုကြီး သူ့လီးကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ဝကိုသွင်းပြီ၊ တင်တင် မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ထားတယ် နှုတ်ခမ်းတွေလဲ ကိုက်ထားမိတယ်။ ကိုကြီးက လီးကိုမထည့်ဘူး၊ စောက်စိကို လီကြီးနဲ့ ပွတ်ပေးနေတော့ တင်တင် ကြောက်စိတ်နဲနဲပြေသွားတယ်၊ မျက်လုံးဖွင်ကြည့်တော့… “ ကလေး အစိက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ လုံးလုံးလေး၊ ကိုကြီး လီးထိပ်က ကောင်းလား ထိရဲ့လား ကလေးရယ် ထိရဲ့လား အစိလေးကို … ” “ အို ကိုကြီးကလဲ ထိနေတဲ့ဟာကို ,.ထိအောင်လုပ်ပြီးတော့ ဟင့် တော်ပြီ အဲ့ကိုမလုပ်နဲ့တော့ ကိုကြီးရာ … ” “ဒါဆို.. ဘယ်ကိုလုပ်ရမလဲ စောက်ပတ်ကလေးကို လုပ်ရတော့မလား…” “ အို..ဘာတွေပြောနေတာလဲ သမီး ရှက်လို့သေတော့မယ် ” လီကြီးက စောက်ပတ်အဝမှာ ပွတ်နေတော့ တင်တင် တမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီ။
အထဲထည့်တာကို တောင့်တမိနေသလိုလို ကော့ပေးချင်သလိုလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေတာဖြစ်မယ် တမင်စောက်ပတ်ယားအောင် လုပ်နေတာ။ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကော်ကော်ထိုးနေတယ်၊ “ ကလေး စောက်ပတ်က မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီးကွာ အရမ်းထန်တဲ့ စောက်ပတ်မျိုးပဲ တစ်နေကုန် အလိုးခံနိုင်တဲ့စောက်ပတ်မျိုး… ” “ အို ကိုကြီးကလဲ ဘယ်လိုတွေပြောနေတာလဲ သမီးက အပျိုလေးနော် ရှက်လို့သေတော့မယ် ” “ အို ကလေးက ဘာတွေရှက်နေတာလဲ ကိုကြီးကတော့ ချစ်တော့မှာ ဖုတ်ဖုတ်ကလေးကို လက်နဲ့ဖြဲပေးထားပါလား၊ ကိုကြီး နဲနဲသွင်းချင်ပြီ ကလေးဟာလေး မနာအောင်ဖြဲပေးနော် ” တင်တင် စဉ်းစားမနေတော့ ဘာမှလဲ ပြောမနေတော့ လိုးမယ်ဆိုတာ သိနေပြီ အဲ့တော့ လက်နဲ့ အသာပဲ ဖြဲပေးထားလိုက်တော့တယ်။ တင်တင် ကားပြီးဖြဲတာနဲ့ လီးကြီးက လိုက်တိုးလာတယ်၊ “ အင့်.ဖြေးဖြေးနော် တင်တင်.ကြောက်တယ်.”
နာတော့မနာဘူး။ အေးလေ ဝင်လဲမဝင်သေးဘူးဆိုတာ တင်တင်သိပါတယ်။ လီက အဝမှာပဲ ဝင်နေသေးတာ၊ “ အေးပါ ကလေးရယ် ကိုကြီး ဖြေးဖြေးလေးပဲ ချစ်ပေးမှာပါ ” ပြောပြီး၊ တင်တင့်နို့ကို ကုန်းယက်တော့ အောက်ကနေ လီးကပါ တိုးဝင်လာတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဝင်ပြီ၊ “ အ .အ,ကိုကြီး အရမ်းမလုပ်နဲ့ …” “ အင်း ဝင်ပြီနော် ကလေး၊ စောက်ပတ်ကလေးရေ ဝင်တယ်မလား….” တင်တင့်ကို ကြည့်ပြီး ပြောတော့ တင်တင် ရှက်သလိုကြီးပဲ ဟော လုပ်ပြီ လုပ်ပြီ ဖိတိုးနေတာ တင်တင်လဲ ငြိမ်နေပေးလိုက်တယ်။ ဝင်တော့ဝင်သလိုပဲ ဒါပေမဲ့ အားသိပ်မရသလို ဖြစ်နေတယ် “အား.ကိုကြီး.ကိုကြီး.နာတယ် ဟင့်ဟင့်” ကိုကြီး ဖိထိုးနေရာကနေ အားနဲ့ဆတ်ကနဲ ထိုးလိုက်တာဖြစ်မယ်။စောက်ပတ်ထဲကို ဗျစ်ကနဲ မည်သလား အောင့်မေ့ရတယ် ဝင်တာ ဒီတစ်ခါတကယ်ဝင်တာ…စောက်ပတ် အဝမှာတင်းပြီး တစ်ဆို့ကြီးဖြစ်နေပြီ .. “ နာသွားလား ကလေးရယ် ” “ အို နာတာပေါ့ အရမ်ကြီးလုပ်တာပဲ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆို…” “အင်း.နောက်ဆိုမနာတော့ဘူး ” ကိုကြီး တင်တင်နို့ကို စို့ပေးနေပြန်ပီ ဒီလိုကြီး နေရတော့လဲ တစ်မျိုးကြီး လိုးရင်လဲ လိုးပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ တင်တင့်စိတ်က အလိုးခံချင်နေပြန်ပီ .. “ ကလေး နာသေးလား ကိုကြီး ချစ်ဦးမယ်နော်…ကလေး စောက်ဖုတ်ကလေးက ကောင်းတယ်မလား၊ နို့လေးတွေကို ထောင်နေတာပဲ ”
“ အို ကိုကြီးကလဲကွာ…သမီးကို ဒီတစ်ခါ ဖြေးဖြေးလေးပဲ လုပ်နော်…အား တအားမထည့်နဲ့ မနာအောင် လို့…အင်း အ အ..အ တော်တော့ အဲ့လောက် တော်တော့ အဲ့လောက် ပဲ ” “ အင်း မနာဘူးဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ ဟုတ်လား ကလေး…” ကိုကြီးကလဲ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး ကိုကြီးက တင်တင်ကို အသာလေးလုပ် နေတော့ တင်တင်လဲ အရသာရှိလာသလိုပဲ စောက်ပတ်အဝမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်နေတာ ကောင်းသလိုလေး။ ကိုကြီး စောက်ပတ်ထဲကို ဒစ်ကြီး ဝင်သထက်ဝင်အောင် လိုးနေတာ တင်တင် သိပါတယ်။ တင်တင် ကိုယ်တိုင်လဲ ထပ်ထပ်ဝင်စေချင်နေတာ … “ ကလေး ကောင်းလား၊ ကိုကြီး နဲနဲလေး ထပ်ချစ်လိုက်ချင်ပြီကွာ ” “ အင်း ဖြေးဖြေး နော် သမီး ကြောက်တယ် ကိုကြီးရယ် ” “ အို ကလေးကလဲကွယ် ဘာမှမကြောက်နဲ့ အစကဒီလိုပဲ အရမ်းကောင်းအောင်ချစ်ပြမယ် ကဲ ” “ အား အား အီးဟီး သေပါပြီ ကိုကြီးရယ် သေပါပြီ ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ ဟင့် ဟင့် နာလိုက်တာ အရမ်းနာတယ် ” ဟင့်… တင်တင် တကယ်ကို နာတာပါ။ ကိုကြီးက လီးကြီးကို စောက်ပတ်ကနေထုတ်ပြီး အတင်းလိုးထည့်လိုက်တာ တင်တင့် စောက်ပတ်အသားကို လီးချောင်ကြီးက အရှိန်နဲ့ ထိုးဖြဲလိုက်သလိုပဲ နင့်ခနဲဝင်သွားပြီးမှ ရပ်တယ်။
ကိုကြီးက တင်တင့်လည်တိုင်ကို နမ်းတော့ တင်တင် အရမ်းဖက်ထားမိတယ်၊ မျက်ရည်တွေတောင်ဝဲတယ် နာနေတာ မပျောက်သေးဘူး… “ ကလေးက အပျိုမှေးခံနေလို့ ဆက်လိုးရင် မနာတော့ဘူးသိလား၊ ကောင်းပဲကောင်းတော့မှာ “ “ ဟင် ဒါဆို သမီးအပျိုမှေး ပေါက်သွားတာလား ” ကိုကြီးက ဘာမှပြန်မပြောပဲ တင်တင့် စောက်ပတ်ကလေးကို ဆက်လိုးနေတယ်၊ ဖြည်းဖြည်းလေး လိုးပေးနေတော့ တင်တင့် စောက်ပတ်ထဲက ပြန်ရွလာရော စောက်ပတ်ထဲ ဝင်ဝင်လာတဲ့ အရသာကို တင်တင် သိလာ တယ်။ မအေးမိကို လိုးသလိုမျိုး အလိုးခံချင်လာတယ်။ မအေးမိလို ကိုကြီးအပေါ်ကနေ လီးကြီးကို တက်ဆောင့်လိုးရရင် ဘယ်လိုများနေမလဲ၊ တင်တင် ဖီးလ်ခံနေတုန်း၊ ကိုကြီး လိုးတာ အရှိန်မြင့်လာတယ်၊ စောက်ဖုတ်ထဲကို တိုးတိုးလာပြန်ပြီ၊ လိုးပေ့စေ လိုးပေ့စေ တင်တင် ပေါင်ကားပြီး၊ လိုးတာကို ဖင်ပါ ကော့ပေးလိုက်တယ် “ အို ကလေးရယ်…ကောင်းလိုက်တာ အပေးကောင်းလိုက်တာကွယ် ” ပြောရင်း လီးကလဲ ဆက်တိုက်လိုးလိုးထည့်တော့ နောက်ဆုံး ကိုကြီးဆီးခုံနဲ့ တင်တင့်ဆီးခုံ ကပ်မိပြီ။
တင်တင့် စောက်ပတ်ထဲ ကိုကြီး လီးမဲကြီး အကုန်ဝင်ပြီပေါ့ ကိုကြီးရယ် လိုးပါတော့ လိုးပေးပါတော့ပဲ တင်တင်ပြောပြစ်လိုက်ချင်တယ်။ တင်တင့် စောက်ပတ်လေးကလဲ ကိုကြီးလိုးတာ ကြိုက်လွန်းလို့ လီးချောင်ကြီးကို ပြန်ပြန်ညစ်ပေးမိတယ်။ လီးကြီး တိုးတိုးပြီး ဝင်လာတာကို တင်တင် ပိုပြီးလိုချင်နေမိပါပြီ စောက်ပတ်ကလေးကလဲတောင့်နေပြီ။ “ ကလေး သောက်ဖုတ်ကလေးက လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ စီးပြီးကျပ်နေ တာပဲ ” “ အဲလိုဆို လိုးလေကိုကြီး စိတ်ကြိုက်လိုးတော့ သမီးကိုလဲ မအေးမိ လိုလိုး သမီးမနာတော့ဘူး ဟင့်ဟင့် အောက်ကယားနေပြီ လုပ်ပေး အရမ်းလုပ်ပေး ” တင်တင် စိတ်ထဲရှိတာတွေ အော်ပလိုက်တယ်၊ ရင်ထဲမှာ အောကားထဲကလိုရော မအေးမိလိုရော လီးမဲကြီးနဲ့ အားရပါးရ အော်အော်ပြီး အလိုးခံချင်နေမိပြီ။ ကိုကြီးကလဲ ကိုယ်ကိုမတ်လိုက်ပြီး၊ တင်တင် ခြေထောက်တွေကို ကိုင်မြှောက်တယ်။ ခြေနှစ်ချောင်းကားပြီး လိုးတာအရမ်းပဲ အင့်ဟာ အင့်ဟာ ဆိုပြီး အမြန်ကြီးလိုးတယ်၊ စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီး စက်တပ်လိုးတာ ကြနေတာပဲကွယ်…
“ အ အအား လိုးလိုး ကိုကြီးလိုး အရမ်းကောင်းတယ် စောက်ပတ်ထဲက အရမ်းကောင်းတယ် အီး အိုး အရမ်းလိုးပါ အရမ်းလိုး ကိုကြီး….” တင်တင် ကိုကြီးရဲ့အဆက်မပြတ် အရမ်းလိုးနေတဲ့ လီးကြောင့် အရေတွေလဲ ထွက်ကုန်ပါပြီ။ တဖုန်းဖုန်းနဲ့ ဆက်တိုက်လိုးနေရင်းကနေ တောင့်တင်းတဲ့ စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်တာ စောက်ရည်ကုန်လို့ညစ်ထုတ်တုန်းမှာပဲ ကိုကြီးတစ်ယောက် “ အ အား ကလေး ကလေး ” ဆိုတဲ့ အော်သံနဲ့ စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီး အရမ်းဝင်ပြီး၊ နွေးကနဲ နွေးကနဲ ဖြစ်လာတယ်။ စောက်ပတ်ထဲ ကောင်းလိုက်တာ စောက်ပတ်ကို လေးငါးခါလောက် အရမ်းလိုးပြီး၊ “ ကလေး ကိုကြီး ပြီးပြီတဲ့ ” “ သမီးလဲ ပြီးပါပြီ ကိုကြီးရယ်….” ပြီးပါပြီ